Steele et al ။ , 2013 (ပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာတောင်းဆိုမှုများကိုဝေဖန်ခြင်း) ("လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပုံများကထုတ်ယူထားသောအာရုံကြောဇီဝကမ္မဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုများနှင့်ဆက်စပ်သည်") - သင်၏ ဦး နှောက်ပေါ်
ဒီနည်းကိုဇူလိုင်လနောက်ခံ, 2013 ဝေဖန်မှု
ဤဆောင်းပါးတွင်ပထမဦးဆုံးတစ်ဦးပြန်ကြားချက် blog post: အဖြစ်ဇူလိုင်လ, 2013 အတွက်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည် တစ် ဦး "စိတ်ပညာယနေ့" ဘလော့ဂ်ပို့စ် ဤတွင်ဆွေးနွေးထားသည့် EEG လေ့လာမှုပူးတွဲစာရေးသူ Dr. Nicole Prause နှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်မတ်လ ၆ ရက်နေ့တွင်စိတ်ပညာနှင့်ဆိုင်သောယနေ့ဘလော့ဂါဒေးဗစ်လိုင်ကဘလော့ဂ်ပို့စ်တွင်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုအနေဖြင့်အင်တာနက်ပေါ်တွင်စွဲလမ်းမှုမရှိခြင်းကိုလေ့လာမှုအသစ်မပြုလုပ်သေးသော်လည်း၊Porn On Your Brain - စွဲလမ်းစေမှာမဟုတ်ဘူး။ " ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုအမူအကျင့်စွဲသုတေသနပြုမှုသည်ဤပြောဆိုချက်နှင့်ဆန့်ကျင်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သံသယရှိကြသည်။ မတ်လ7ရက်နေ့တွင်ကျွန်တော်တစ် ဦး ရေးသားခဲ့သည် ပြန်ကြားချက်ဘလော့ဂ် စိတ်ပညာနှင့်ပတ်သက်သောယနေ့ခေတ်တွင် Ley ၏ Prause ၏အတည်မပြုရသေးသော EEG လေ့လာမှု၏ခက်ခဲရှုပ်ထွေးသော (နှင့်နောက်ဆုံးတွင်တိကျမှုမရှိသော) ဖော်ပြချက်အပေါ် အခြေခံ၍ ကျွန်ုပ်တို့၏စိုးရိမ်မှုများကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။
၎င်းသည်လေ့လာမှုကိုရေးသားသူတစ် ဦး ဖြစ်သည့်နီကိုးလ်ပရာ့စ်၏ပုဂ္ဂလိကစာပေးစာယူကိုဆွဲယူခဲ့သည်။ သူသည်သူမအားလေ့လာမှုကိုပေးရန်သူငြင်းဆန်ခဲ့သည်။ တပြိုင်နက်တည်းဆိုက်ဘာ-နောက်ယောင်ခံ။ နောက်ဆုံးတွင် Psychology Today ၏အယ်ဒီတာများသည် Ley ၏မူလရာထူးနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏တုံ့ပြန်မှုကိုဖယ်ရှားခဲ့သည်။ ပုံပြင်ကိုအီးမေးလ်များနှင့်အခြားစာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူကြည့်ပါ။ မတ်လနှင့်Aprilပြီလ၊ ၂၀၁၃ - နီကိုးလ်ပါဝါ၏အနှောင့်အယှက်ပေးခြင်း၊ မှားယွင်းသောစွပ်စွဲချက်များနှင့်ခြိမ်းခြောက်မှုများစတင်ခြင်း (သူမနှင့် David Ley တို့သည် PT blog post တစ်ခုတွင်ဂယ်ရီ Wilson အားပစ်မှတ်ထားပြီးနောက်).
UPDATE -7/ 21 / 13: David Ley blog post ပြီးနောက်ငါးလအကြာ Prause EEG လေ့လာမှုပေါ်ထွက်လာခဲ့သည် -လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ, မ hypersexuality, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေအားဖြင့်ရူးနှမ်း neurophysiological တုံ့ပြန်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောဖြစ်ပါတယ်"(သံမဏိ et al။ , 2013) ။ သုတေသနအဖွဲ့တွင် Steele, Staley, Fong နှင့် Prause တို့ပါဝင်သည်။ နောက်ဆုံး ၂ ခုသည်“ SPAN Lab” (ယခုအသုံးမပြုတော့သော ၀ က်ဘ်ဆိုက်) ၏အသင်းဝင်များဖြစ်သည်။ Fong, စကားမစပ်ရှိပါတယ် လူသိရှင်ကြားစောဒကတက် ဒါကညစ်ညမ်းဆေးစွဲတာမဟုတ်ပါဘူး။
Nicole Prause သည် Wilson ၏ blog post (နှင့်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော) ကိုဖယ်ရှားခဲ့သော Psychology Today အယ်ဒီတာနှင့်ဆက်သွယ်ခဲ့သည် အခြားပို့စ် ဆန်းစစ် သံမဏိ et al ။, 2013. ငါသည်ဤအပြုအမူအားဖြင့်တုန်လှုပ်မိပါတယ်။ သူမက Psychology Today ၏မှတ်ချက်များအပိုင်းတွင်ဖိတ်ရန်ကြိုဆိုပါသည်။ အစား Prause သည်သားကောင်အားကစားနေစဉ်အသရေဖျက်မှု၊ ကြည့်ပါ သူမနှင့်သဘောမတူသူများကိုနီကိုးလ်ပရာ့စ်၏ဆက်လက်အနှောင့်အယှက်ပေးမှုစာမျက်နှာကိုမှတ်တမ်းတင်ထားသည်.
Addendum: Prause သည်ဝေဖန်သူများအားဆင်ဆာလုပ်ရန်ကြိုးစားနေသဖြင့်ကျွန်ုပ်ရရှိနိုင်ပါသည် ဒေးဗစ်လီလေရဲ့မူလ post နဲ့ကျွန်မရဲ့တုံ့ပြန်မှု, ၂၀၁၃ ခုနှစ် မတ်လမှစတင်၍ မူလ post အောက်ရှိမှတ်ချက်များနှင့်အတူ - Prause ၏မှတ်ချက်များအပါအ ၀ င်ကျွန်ုပ်၏တုန့်ပြန်မှုသည်
UPDATE - 9/22/13: ယောဟနျသအေဂျွန်ဆင်ပါရဂူဘွဲ့အပေါ် သံမဏိ et al။ , 2013 (မှတ်ချက်များအပိုင်းများတွင်နီကိုးလ် Prause SOCKS ရုပ်သေးဆွေးနွေး)
UPDATE -2/ 10 / 2014: David Ley & Nicole Prause တို့ထပ်မံစုစည်းခဲ့သည်။ Ley သည်“ The Myth of Sex စွဲလမ်းမှု” ကိုရေးသားသူဖြစ်ပြီး SPAN Lab မှ Prause နှင့်ပူးပေါင်းခဲ့သည်။ ဧကရာဇ်အဘယ်သူမျှမအဝတ်အစားရှိထား: အ "babyish စွဲ" မော်ဒယ်တစ်ပြန်လည်သုံးသပ် (Ley et al။ , 2014) ။ သုတေသီဓမ္မဓိဋ္ဌာန်အဘို့ဤမျှလောက်။ ဒါကစာပေ၏စစ်မှန်သောပြန်လည်သုံးသပ်မဟုတ်ခဲ့ပေ။ အဲဒီအစား Ley et al ။ , ချယ်ရီ-ကောက်ယူလေ့လာမှုများအတွင်းလိုင်းများကိုလှညျ့စား, အနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှုဖေါ်ပြခြင်းအားလုံးလေ့လာမှုများချန်လှပ်, နှင့်တောင်းဆိုမှုများနှင့်ဆက်စပ်သောမဟုတ်မျိုးစုံအညွှန်းပါရှိသော။ ဒီကိုကြည့်ပါ et al ယင်း Ley ၏ကျယ်ပြန့်တည်ဆောက်မှု။ ပြန်လည်သုံးသပ်။ ရှင်းရအောင် porn စွဲ၏တည်ရှိမှုပယ်ချကြောင်းလေ့လာမှုတစ်ခုမျှမရှိ။ အောက်တွင်ဖတ်ရှုနိုင်သည့်အတိုင်းဤနေရာတွင်ဝေဖန်ထားသော Prause လေ့လာမှုကအမှန်တကယ်ပြသသည် ပိုမိုမြင့်မား လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပုံများကိုတုန့်ပြန်ခြင်း - စွဲလမ်းသူများသည်သူတို့၏စွဲလမ်းမှုအပေါ်အမြင်သဘောထားကိုမြင်သောအခါဖြစ်ပေါ်လာသည့်အတိအကျဖြစ်သည်။
UPDATE - 2/21/14: ၏တစ်ဦးကလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အချင်းချင်းပြန်လည်သုံးသပ်ဝေဖန်မှု သံမဏိ et al။ 2013 - 'မြင့်မားသောအလိုဆန္ဒ' သို့မဟုတ် 'မျှသာ' စွဲလမ်းမှုလော။ Donald L. Hilton, Jr. မှ Steele et al အားတုံ့ပြန်မှု။ (၂၀၁၄).
update - 7/12/14: တစ်ဦးက ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်ကအသစ်က fMRI လေ့လာမှု (Voon et al ။ 2014) ကိုဆုလာဘ်ဆားကစ်၏ cue-သွေးဆောင် activation အကဲဖြတ်နှင့်မူးယစ်ဆေးစွဲထင်ဟပ်ကြောင်း activation တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာအစ compulsive porn အသုံးပြုသူများကိုထိန်းချုပ်မှုထက်ပိုမိုမြင့်မားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ တကယ်တော့ကြုံတွေ့အများအပြားဘာသာရပ်များကိုမှန်ကန်မိတ်ဖက်တွေနဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒလျှော့ချ။ ဤသည်တွေ့ရှိချက်သံမဏိ et al ဆန့်ကျင်ဘက်သဖွယ်ဖြစ်နေသည်။ သံမဏိ et al အောက်တွင်ကရှင်းပြသည်အဖြစ်အခက်အခဲဟာသူတို့ရဲ့ porn အသုံးပြုမှုကိုထိန်းချုပ်ရှိခြင်းတစ်ဦးချင်းစီရိုးရှင်းစွာ (လူဦးရေ၏ကျန်ထက်ပိုမိုမြင့်မားလိင်စိတ် posses သော။ ခဲ့ဘူးပြောဆိုချက်ကို မဟုတ် ဦး နှောက် activation နှင့်အတူပိုမိုမြင့်မား libido ဆက်စပ်မှုကိုရှာပါ။ ပိုအရေးကြီးတာက Cambridge လေ့လာမှုက Nicole Prause EEG လေ့လာမှုကိုလေ့လာပြီး porn cues များနှင့်ထိတွေ့သောအခါပိုမိုမြင့်မားသော P300 သည်စွဲလမ်းမှုပုံစံနှင့်ကိုက်ညီကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောမှတ်တမ်းတင်ထားသည့်အတိုင်းဤလေ့လာမှု၏တွေ့ရှိချက်များသည်စာရေးသူများ၏ခေါင်းစီးများသို့မဟုတ်မှတ်ချက်များနှင့်လုံးဝမသက်ဆိုင်ပါ။
UPDATE - ၂၀၁၅ အစောပိုင်း: နီကိုးလ် Prause မရှိတော့ UCLA (သို့မဟုတ်အခြားမည်သည့်တက္ကသိုလ်) ကအလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
UPDATE - ၂၀၁၅ ခုနှစ် - နီကိုးလ်ပရာ့စ်သည်သူမအား“ လိင်စွဲလမ်းမှု” အပေါ်ဆန့်ကျင်သော“ ကျွမ်းကျင်သော” သက်သေခံချက်ကိုပေးသည်။. သူမ၏အသစ်အထဲကနေ Liberos website က:
Prause မှအကျိုးသူမ၏န်ဆောင်မှုရောင်းဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပါတယ်သော်လည်းကြောင့်ဖြစ်ပုံရသည် ပြောဆိုထားသည် သူမ၏နှစ်ခု EEG လေ့လာမှုများ၏ဆန့်ကျင်ညစ်ညမ်းစွဲကောက်ချက် (1, 2), သက်တူရွယ်တူ-ပြန်လည်သုံးသပ်ဝေဖန်မှုနှစ်ဦးစလုံးလေ့လာမှုများစွဲမော်ဒယ်ကိုထောကျပံ့ပြောပါသော်လည်း။ ဖြစ်ကောင်း ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအတွက်စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်နီးစပ်သောဆက်ဆံရေး သုတေသီတစ် ဦး ၏သဘောထားအမြင်ကိုဖုံးကွယ်ထားနိုင်သည်။
ပထမ ဦး ဆုံး EEG လေ့လာမှု (အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်) သည်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုအတွက်သက်သေအထောက်အထားများကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးဘာသာရပ်များသည်ညစ်ညမ်းဓါတ်ပုံများနှင့်ထိတွေ့စဉ်ပိုမိုမြင့်မားသော EEG ဖတ်ခြင်း (P300) ကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ မူးယစ်ဆေးစွဲသူများသည်သူတို့၏စွဲလမ်းမှုနှင့်ဆက်စပ်သောပုံများ (ဥပမာပုံများ) နှင့်ထိတွေ့မိပါကပိုမိုမြင့်မားသော P300 ကိုတွေ့ရှိနိုင်သည်။ ထို့အပြင်လေ့လာမှုတွင်လိင်ဆက်ဆံခြင်းအတွက်အလိုဆန္ဒနည်းပါးမှုနှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံခြင်းအတွက်လိင်ဆက်ဆံမှုအတွက်ပိုမိုများပြားသော“ cue-reactivity” ကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ ရိုးရိုးလေးပြောရမယ်ဆိုရင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကို ဦး နှောက်ကပိုအားကောင်းလာစေတယ်။ မအတိအကျခေါင်းကြီးပိုင်းတွင်ဖော်ပြထားသော။
နောက်ဆုံးထွက် - On စက်တင်ဘာလ 15th, 2016 နီကိုးလ် Prause ဝက်ဘ်ဆိုက် Prolog အပေါ်တစ်ဦးအတုသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တင်ခဲ့သည်။ Prause ရဲ့ "သတင်းထုတ်ပြန်ချက်" တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းနှင့်ဂယ်ရီ Wilson က, Donald ဟီလ်တန် MD, Utah ပြည်နယ်အထက်လွှတ်တော်အမတ် Todd Weiler နှင့်ဒေါက်တာ Todd မတ်ေတာအပါအဝင်တော်တော်များများတစ်ဦးချင်းစီ libeled ။ ဒါကသတင်းထုတ်ပြန်ချက်၏ဖြစ်နေဆဲဘာလဲ, ဒါဟာသူတို့ရဲ့မူဝါဒများကိုချိုးဖောက်သောကွောငျ့ Prolog အဖြစ်2ရက်ပေါင်းနောက်ပိုင်းတွင်အကြောင်းအရာဖယ်ရှားခဲ့သည်။ ငြင်းပယ်ခံဖို့မဟုတ်ဘူး, Prause သူမ၏ AmazonAWS အကောင့်ပေါ်တွင်သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ရဲ့ content တွေကိုတင်လိုက်တယ်။ ဤတွင်ကျနော်တို့အကြောင်းကိုသူမ၏မှတ်ချက်များကိုဆနျးစစျ UCLA မှသုတေသီဟောင်းလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် Rory Reid ပါရဂူဘွဲ့။ Prause ရဲ့ rant ကနေကောက်နုတ်ထားပါတယ်:
"စိတ်ပညာရှင်" နှင့် "LCSW" Rory Reid လူနာအားမိမိန်ဆောင်မှုကြေငြာဖို့သုံးပြီးခံခဲ့ရပေမယ့်တကယ်အပိုင်မပြုခဲ့ကြောင်းကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်နှင့်အတူလိုင်စင်နှစ်ခုလုံးစညျးမဉျြးစညျးကမျးခေါင်းစဉ်ဖြစ်ကြသည်။ Rory ရိဒ်သည်လည်းမဟုတ်မမှန်သူတက်ရောက်ခဲ့သည်ကြောင်းဖော်ပြထားနှင့်ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်မှဆရာ, ဆရာမများအပေါ်ဖြစ်ပါတယ် UCLA မှာ "လက်ထောက်ပါမောက္ခ" ဖြစ်ပါတယ်။ ရိဒ်ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်မှဒြေဘယ်တော့မှကြီးနှင့် UCLA မှာတစ်ဦးတွဲဖက်မဟုတျဘဲသက်တမ်းလမ်းကြောင်းဒြေဖြစ်ပါတယ်။ ရိဒ် UCLA မှာပြဿနာလောင်းကစားများ၏နိုင်ငံတော်ရဲ့ကယ်လီဖိုးနီးယားရုံး၏အချိန်ပြည့်ဝန်ထမ်းအဖြစ်စာရင်းဝင်, ဒါကြောင့်ရိဒ်ကသူ့ပြည်နယ်စာချုပ်ချိုးဖောက်မပါဘဲလိင်ရုပ်ရှင်အကြောင်းကိုလိင်ရုပ်ရှင်နှင့်အဆက်အသွယ်နိုင်ငံရေးသမားများလေ့လာနိုင်မည်ကိုမည်သို့ရှင်းလင်းဖြစ်ပါတယ်။
Rory Reid ဟောင်း UCLA မှသုတေသီနီကိုးလ် Prause အပေါ်အနည်းငယ်နောက်ခံဒီနေရာမှာအသုံးဝင်သည်။ Rory Reid UCLA မှာနီကိုးလ် Prause ရဲ့အကျဉ်းချုပ်စစ်မှုထမ်း 2013 စတင်ခဲ့ပြီးမတိုင်မီကတည်းကဆေးပညာ, UCLA ၏ဒေးဗစ်ဂက်ဖင် School မှာသုတေသနစိတ်ပညာရှင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ရိဒ်ရဲ့သုတေသနဒေသများ hypersexuality နှင့်လောင်းကစားစွဲဖြစ်ကြသည်။
Prause နဲ့တူရိဒ်, မကြာခဏစောဒကတက်ထားပါတယ် ဆန့်ကျင် ၏တည်ရှိမှု "လိင်စွဲ။ " ရိဒ်သူ့ရုံးခန်း Prause ရဲ့ UCLA မှာလာမယ့်တံခါးကိုညာဘက်ခဲ့တဲ့ 2013 ဆောင်းပါး၌ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။ 2013 ခုနှစ်တွင်နီကိုးလ် Prause သူမ၏အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအဖြစ် Rory Reid ဖော်ပြထားသော "SPAN Lab က။ " ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း Reid UCLA မှာသုတေသီဖြစ်နေဆဲစဉ် Prause ရဲ့ UCLA ရဲ့စာချုပ်သက်တမ်းတိုးမခံခဲ့ရပါဘူး။ ဘာပဲသူမမနှစ်သက်ပြု, Prause ယခုလူသိရှင်ကြားနှင့်ရက်စက်စွာဟောင်းတစ်ဦးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့်ဇာတ်လမ်းကပိုပြီးရှိပါတယ်။ လပေါင်းများစွာအစောပိုင်းကအတွက် ဒီဇင်ဘာလတွင် 5th, 2014 (ကယ်လီဖိုးနီးယားအာဏာပိုင်များထံ Rory Reid အစီရင်ခံရန်စာဖတ်သူများတိုက်တွန်း) Prause ရဲ့ "သတင်းထုတ်ပြန်ချက်" mirroring အများအပြားမှတ်ချက်များ porn ပြန်လည်နာလန်ထူ site ပေါ်တွင် posted ခဲ့ကြသည် YourBrainRebalanced အသစ်စက်စက်အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်အထက်တွင်မြင်သည်အတိုင်း, Prause အမျိုးမျိုးသောနာမည်သုံးပြီး YBR အပေါ်မှတ်ချက်ပေးတဲ့အလေ့အထတို့ကိုလည်းလုပ်လေ၏။ အဆိုပါသည်ဤမှတ်ချက်များ၏ပထမဦးဆုံးက အမှန်တရားကိုပြောပါ,2လင့်များပါရှိသည်။ တစ်ခုမှာ link ကို TellTheTruth ရဲ့တောင်းဆိုချက်များ (2-4 username များအဖြစ်စကားလုံးများကိုစာလုံးနှင့်အတူ Prause မှန်မှန်နာမည်ကိုသုံးပါ) ထောက်ပံ့ထင်သက်သေအထောက်အထားများနှင့်အတူ Scribd အပေါ်တစ်ဦး PDF ကိုခြင်းငှါသွားလေ၏။
ဒီမှာတပြင်လုံးကိုပုံပြင်နှင့်စာရွက်စာတမ်းများကိုကြည့်ပါ: UCLA ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဟောင်း Rory C. Reid PhD အားတိုက်ခိုက်ခြင်းနှင့်ခြိမ်းခြောက်ခြင်း။ လွန်ခဲ့သော ၂ နှစ်က“ TellTheTruth” သည်အလားတူတောင်းဆိုမှုများနှင့်စာရွက်စာတမ်းများကို Prause ၏ခြေအိတ်ရုပ်သေးများကမကြာခဏပြုလုပ်သော porn recovery site ပေါ်တွင်တင်ခဲ့သည်။
UPDATE: 2019 - Prause သည်နှစ်ပေါင်းများစွာစာရေးဆရာများ၊ သုတေသီများ၊ ကုထုံးပညာရှင်များ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပညာရေးဆိုင်ရာဂျာနယ်များ၊ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးတွင်အမျိုးသားများ၊ သတင်းထောက်များနှင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုအသုံးပြုခြင်းမှရရှိသောအကျိုးအမြတ်များကိုသက်သေပြရန်အခြားသူများကိုအနှောင့်အယှက်ပေးခဲ့သည်။ YBOP သည်ဤစာမျက်နှာရှိ Prause ရေခဲစိုင်၏အစွန်အဖျားကိုမှတ်တမ်းတင်ထားသည် - ဂယ်လီ Wilson နှင့်အခြားသူများကိုနီကိုး Prause ၏ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာနှောင့်ယှက်မှုနှင့်အသရေဖျက်မှု (Prause ၏သားကောင်များသည်နောက်ထပ်လက်စားချေခြင်းကိုကြောက်ရွံ့သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ထုတ်ဖော်ရန်လွတ်လပ်ခွင့်မရှိသည့်ဖြစ်ရပ်များစွာရှိသည်။ ) သူမဖြစ်ပုံရသည် အဆိုပါညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်အတူအတော်လေးအဆင်ပြေနေ, ဒီထဲကနေမြင်နိုင်ပါသည်အဖြစ် X-အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်ဝေဖန်သူများအဖွဲ့အစည်း (XRCO) ဆုအခမ်းအနား၏အနီရောင်ကော်ဇောပေါ်သူမ၏၏ပုံရိပ် (ညာဘက်အစွန်ဆုံး)။ (ဝီကီပီးဒီးယားအဆိုပါအဆိုအရ XRCO ဆုပေးပွဲ အမေရိကန်ကပေးတဲ့နေကြတယ် X-အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်ဝေဖန်သူများအဖွဲ့ နှစ်စဉ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူဖျော်ဖြေရေးအတွက်အလုပ်လုပ်လူများနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းဆုစက်မှုလုပ်ငန်းအဖွဲ့ဝင်များအတွက်သီးသန့် reserved ပြသတစ်ခုတည်းသောအရွယ်ရောက်ပြီးသူဖြစ်ပါတယ်။) ။ ဒါဟာအစ Prause ရှိစေခြင်းငှါပုံပေါ် ဘာသာရပ်များအဖြစ်ရရှိသော porn အဆိုတော် အခြားညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းအကျိုးစီးပွားအုပ်စုတစ်စုကတဆင့်, အ အခမဲ့ခွန်းညွန့်ပေါင်း။ FSC မှရရှိသောဘာသာရပ်များကိုသူမတွင်အသုံးပြုခဲ့သည် ငှားရမ်း - သေနတ်လေ့လာမှု ထိုအပေါ် အကြီးအကျယ်စှနျး နှင့် အလွန်စီးပွားဖြစ်ဖြစ်သော“ Orgasmic Meditation” အစီအစဉ် (ယခုဖြစ်ခြင်း FBI ကစုံစမ်းစစ်ဆေး) ။ ချီးမွမ်းခြင်းကိုလည်းပြုလုပ်ခဲ့သည် မထောက်ပံ့တောင်းဆိုမှုများ အကွောငျး သူမ၏လေ့လာမှုများ၏ရလဒ်များကို နှင့်သူမ၏ လေ့လာမှုရဲ့နည်းစနစ်။ ပိုပြီးစာရွက်စာတမ်းများအဘို့အတွေ့: နီကိုးလ် Prause သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအတွက် Porn စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအားဖြင့်ဖြစ်တယ်? အောက်ပါစာမျက်နှာများ:
Update ကို (ဧပြီလ, 2019): YBOP ၏ဝေဖန်မှုများကိုနှုတ်ပိတ်ရန်ကြိုးစားရာတွင် Nicole Prause နှင့် David Ley ဦး ဆောင်သောအဖွဲ့သည် YBOP ၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုခိုးယူရန်ကြိုးပမ်းနေသည်။ အသေးစိတ်အတွက်ဒီစာမျက်နှာကိုကြည့်ပါ။ Porn စွဲ Deniers (www.realyourbrainonporn.com) ကလဲဆင်နွှဲခဲ့ပါသေးတယ်ရန်လိုအမှတ်တံဆိပ်ချိုးဖောက်မှု။ နီကိုးလ်ပရပ်စ်၊ ဒေးဗစ်လိုင်နှင့်အခြား pro-porn“ ကျွမ်းကျင်သူများ” တို့သည် www.realyourbrainonporn.com တွင်ရှိကြသည် တစ်အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးနှင့်ရပ်တန့်စာတစ်စောင်ကိုစေလွှတ်။ ဥပဒေရေးရာလုပ်ရပ်များကိုလိုက်။ ဆက်လက်။ RealYBOP ၏ twitter သည် (၎င်း၏ကျွမ်းကျင်သူများ၏အတည်ပြုချက်ဖြင့်) သည်အသရေဖျက်မှုနှင့်နှောင့်ယှက်မှုများတွင်ပါ ၀ င်နေသည်ကိုစာဖတ်သူသိသင့်သည်။ ဂယ်ရီ Wilson က, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes, ဂါယူဆပါသည် နှင့် အခွားသူမြားစှာ။ ဒါ့အပြင် David Ley နှင့်အခြား“ RealYBOP” ကျွမ်းကျင်သူနှစ်ယောက်လည်းရှိသည် porn စက်မှုလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီကြီးများကလျော်ကြေးငွေခံရ xHamster (သူတို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်များမြှင့်တင်ရန်ဆိုလိုသည်မှာ StripChat) နှင့်ညစ်ညမ်းစွဲခြင်းနှင့်လိင်စွဲလမ်းဒဏ္ဍာရီဖြစ်ကြောင်းသုံးစွဲသူများကစည်းရုံးသိမ်းသွင်းရန်!
Update ကို (နွေရာသီ, 2019): မေလ 8, 2019 တွင် Donald ဟီလ်တန်, MD တစ်ဦးအသရေဖျက်မှုတင်သွင်း se နှုန်း ရုံးတင်စစ်ဆေးမှု Nicole Prause & Liberos LLC (ဒေါက်တာဟီလ်တန်ပြစ်တင်ဝေဖန်မှုခံရသည်) သံမဏိ et al ။ ) 2014 ၌တည်၏။ ဇူလိုင်လ 24, 2019 တွင် Donald ဟီလ်တန်ကသူ့အသရေဖျက်မှုတိုင်ကြားချက်ပြင်ဆင် (အလားတူနှောင့်ယှက်၏ 1 သည်အခြား Prause သားကောင်များအနေဖြင့် (2) ဆေးစစ်တိုင်ကြားချက်တစ်ခုအန္တရာယ်ရှိတဲ့တက္ကဆက်ပြည်နယ်ဘုတ်အဖွဲ့, (3) မှားယွင်းသောဒေါက်တာဟီလ်တန်သည်သူ၏အထောက်အထားများလိမ်ခဲ့ကွောငျးစွပ်စွဲချက်များနှင့် (9) ကျမ်းကျိန်လွှာကိုမီးမောင်းထိုးပြနိုင်ရန်ယောဟနျသ Adler, MD, ဂယ်ရီ Wilson က, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes, Stacy အညွှန့်, LICSW, Linda Hatch, Ph.D, Bradley အစိမ်းရောင်, Ph.D, Stefanie Carnes, Ph.D, Geoff Goodman, Ph.D, Laila Haddad.)
Update ကို (အောက်တိုဘာ၊ 2019): အောက်တိုဘာလ 23, 2019 Alexander Rhodes (တည်ထောင်သူ reddit / nofap နှင့် NoFap.com) သည်အသရေဖျက်မှုဖြင့်တရားစွဲဆိုခဲ့သည် နီကိုးလ် R ကိုချီးမွမ်း နှင့် Liberos LLC။ ယင်းကိုကြည့်ပါ ဒီမှာတရားရုံးစာရင်း။ Rhodes မှတင်သွင်းသောမူလတန်းတရားရုံးစာရွက်စာတမ်းများအတွက်ဤစာမျက်နှာကိုကြည့်ပါ NoFap တည်ထောင်သူ Alexander Rhodes Nicole Prause / Liberos အားတရားစွဲဆိုမှု.
Update ကို (နိုဝင်ဘာ၊ 2019): နောက်ဆုံးအနေနဲ့တိကျသောမီဒီယာလွှမ်းခြုံမှု - “ NoFap မှ Porn စွဲမှုပံ့ပိုးမှုအဖွဲ့မှအဲလက်စ်ရော့ဒ်သည်ညစ်ညမ်းသောလိင်စိတ်ပညာရှင်အားတရားစွဲဆိုလိုက်သည်” ၏ Megan Fox ကဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ် PJ မီဒီယာ နှင့် “ နို ၀ င်ဘာလတွင်ဖြစ်ပွားသောစစ်ပွဲများသည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရဖြစ်လာသည်”၏ဒိုင်ယာနာ Davison ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ် The Post Millennial။ Davison သည် Prause ၏မတူကွဲပြားသောအပြုအမူများနှင့်ပတ်သက်သည့်ဤ6မိနစ်ဗီဒီယိုကိုလည်းထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ Porn သည်စွဲစွဲလမ်းမှုလော။, နှင့်ဤ Prause ရဲ့နှောင့်ယှက် / မှားယွင်းသောစွပ်စွဲချက်၏အချိန်ဇယား: VSS ပညာရေးစစ်ပွဲအချိန်ဇယား.
နောက်ဆုံးသတင်းများ (၂၀၂၀၊ သြဂုတ်လ) တရားရုံး၏စီရင်ချက်များအရနီကိုးလ်ပရာ့စ်အားပြစ်မှုကျူးလွန်သူအဖြစ်မဟုတ်ဘဲပြစ်မှုကျူးလွန်သူအဖြစ်ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်. ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်မတ်လတွင်၊ Prause သည်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်သက်သေအထောက်အထားများနှင့်သူမ၏ပုံမှန်မဟုတ်သောလိမ်လည်မှုများ (ငါ့ကိုမှားယွင်းစွာစွပ်စွဲသည်ဟုမဟုတ်မမှန်စွပ်စွဲခြင်း) ဖြင့်ငါ့ကိုဆန့်ကျင်ရန်အကြောင်းမဲ့ယာယီတားဆီးမိန့်ကိုရှာဖွေခဲ့သည်။ တားမြစ်ထားသည့်အမိန့်တောင်းခံရန် Prause ၏တောင်းဆိုချက်အရသူမကသူမကို YBOP နှင့် Twitter တွင်တင်ခဲ့သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။မုသားသက်သေခံမှုသည် Prause တွင်အသစ်အဆန်းမဟုတ်ပါ) ။ တရားမ ၀ င်စနစ် (TRO) ကိုတလွဲအသုံးပြုခြင်းကြောင့်ငါ့ကိုနှုတ်ဆိတ်။ နှောင့်ယှက်ရန် Prause ကို SLAPP ဆန့်ကျင်မှုဖြင့်တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။ သြဂုတ်လ ၆ ရက်နေ့တွင်လော့စ်အိန်ဂျယ်လိပြည်နယ်ကောင်တီအထက်တရားရုံးက Prause သည်ကျွန်ုပ်ကိုတားမြစ်သည့်အမိန့်ရယူရန်ကြိုးပမ်းခဲ့သည် (အများပြည်သူပါဝင်မှုကိုဆန့်ကျင်။ မဟာဗျူဟာမြောက်တရားစွဲဆိုမှု) (အများအားဖြင့်“ SLAPP ဝတ်စုံ”) ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။။ Prause သည်သူမ၏လိမ်လည်လှသော TRO တစ်လျှောက်လိမ်ညာခဲ့သည် သုညအတည်ပြုသက်သေအထောက်အထား သူမကိုထောက်ပံ့ရန် ထူးဆန်းတဲ့တောင်းဆိုမှုများ ငါသူမ၏အညှာသို့မဟုတ်နှောင့်ယှက်ကြောင်း အဂတိတရားအားဖြင့်တရားရုံးက Prause သည်ကျွန်ုပ်အားတိတ်ဆိတ်စွာနှိပ်စက်ရန်နှင့်လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်ရှိခြင်းကိုတားဆီးရန်တားမြစ်သည့်အမိန့်ကိုချိုးဖောက်ခဲ့သည်။ ဥပဒေအရ SLAPP ၏စီရင်ချက်သည် Prause အားကျွန်ုပ်၏ရှေ့နေကြေးပေးဆောင်ရန်တာဝန်ရှိသည်။
နောက်ဆုံးသတင်းကိုရယူရန် (ဇန်နဝါရီလ၊ ၂၀၂၀) Prause သည် ၂၀၂၀၊ ဒီဇင်ဘာလတွင်အသရေဖျက်မှုဖြင့်ကျွန်ုပ်ကိုပြစ်တင်ရှုတ်ချသည့်ဒုတိယတရားစွဲဆိုမှုကိုတင်သွင်းခဲ့သည်။ 2020 ဇန်နဝါရီလ 22 ရက်နေ့တွင်ကြားနာမှာ အော်ရီဂွန်တရားရုံးကကျွန်ုပ်၏မျက်နှာသာပေးမှုကိုစီရင်ပြီး Prause အားကုန်ကျစရိတ်များနှင့်ထပ်မံပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့သည်။ ဤသည်ပျက်ကွက်အားထုတ်မှုတစ် ဦး ဖြစ်ခဲ့သည် တစ်ဒါဇင်တရားစွဲမှု လူသိရှင်ကြားခြိမ်းခြောက်ခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ပြီးခဲ့သည့်လများအတွင်းတင်သွင်းခဲ့သည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာမတော်မတရားသတင်းပို့ခံရပြီးနောက်သူမအားထုတ်ဖော်ပြောဆိုသူများအားနှုတ်ပိတ်ရန်အမှန်တကယ်တရားစွဲဆိုမှုများ၏ခြိမ်းခြောက်မှုများကိုတိုးမြှင့်ခဲ့သည် ညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်အနီးကပ်ဆက်ဆံမှု နှင့်သူမ၏မလိုတမာသောအပြုအမူသို့မဟုတ်သူမအပေါ်လက်ရှိလှုပ်ရှားနေသည့်အသရေဖျက်မှု ၃ ခုတွင်ကျိန်ဆိုခြင်းကိုပြုသူ
YBOP ဆန်းစစ်ချက် - Nicole Prause သည်သတင်းစာတွင်ဖော်ပြထားသည်မှာ Steele et al ။ , 2013 ၏ရလဒ်များကိုတိုက်ရိုက်ဆန့်ကျင်နေသည်
ယခုလေ့လာမှုအသစ်ကိုကျွန်ုပ်တို့ယခုလေ့လာခဲ့ပြီး၊ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုစွဲလမ်းမှုတည်ရှိမှုကိုမည်သို့သက်သေပြနိုင်ကြောင်းနှင့် ပို၍ ရှုပ်ထွေးသွားသည်။ အောက်ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ပို့စ်ဖြစ်ပါတယ်
ယခုလေ့လာမှု၏စာရေးသူများကသူတို့၏တွေ့ရှိချက်များအရ“ လိင်စိတ်တူညီမှု” (ဤကိစ္စတွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိခြင်း) သည်လိင်စွဲလမ်းမှုထက်လိင်ဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒများကိုရှင်းပြနိုင်သည်ဟုဆိုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အမြင်တွင်သူတို့၏အချက်အလက်များသည်သူတို့၏ယုံကြည်ချက်များကိုအဝေးမှမထောက်ခံပါ။
လေ့လာမှု: "လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Desire မဟုတ်ဘဲ Hypersexuality, လိင်ပုံများအားဖြင့်ရူးနှမ်း Neurophysiological တုံ့ပြန်ချက်မှ Related ဖြစ်ပါတယ်"
သင်တန်းသားများကို: “ လိင်မှုဆိုင်ရာရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်းအားပြproblemsနာများကြုံတွေ့နေကြရသူများကိုတောင်းဆိုခြင်း” ကိုကြော်ငြာခြင်းဖြင့်စမ်းသပ်သူ ၅၂ ယောက်ကိုစုဆောင်းခဲ့သည်။ သင်တန်းသားများကို (ပျမ်းမျှအသက် 52) တစ် ဦး ခဲ့ကြသည် အထီး (39) နှင့်အမျိုးသမီးရောနှော (13) ။7သင်တန်းသားများခဲ့ကြသည် မဟုတ်သောလိင်ကွဲ။
သူတို့ဟာခဲ့အဘယျသို့: သင်တန်းသားများကို 225 ဓါတ်ပုံတွေကိုကြည့်ရှုအားပေးကြသည်အဖြစ် EEG ဖတ်ပါ (ဦးရေပြားပေါ်မှာလျှပ်စစ်လှုပ်ရှားမှု) ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။ ပုံ၏ 38 လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရှိ. , အားလုံးပါဝင်ပတ်သက်အမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့်တယောက်သောသူ။ ဖတ်နေဒါကအထူးသဖြင့် EEG (P300) လှုံ့ဆော်မှုဖို့သတိတိုင်းတာသည်။
သင်တန်းသားများကိုလည်း4မေးခွန်းပြီးစီးခဲ့: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Desire Inventory (SDI), လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive စကေး (SCS), လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူမေးခွန်းလွှာ (SBOSBQ) ၏သိမှုနှင့်အပြုအမူရလဒျကို၎င်း, ညစ်ညမ်းစားသုံးမှု Effect စကေး (PCES) ။
ရည်ရွယ်ချက်: EEG စာဖတ်ခြင်းပျမ်းမျှနှင့်မေးခွန်းပုံစံအမျိုးမျိုးတွင်ပါ ၀ င်သူများ၏ရမှတ်များအကြားဆက်စပ်မှုကိုရှာဖွေရန် - မည်သည့်ဆက်စပ်မှုမဆိုပြproblemနာရှိသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုသည်စွဲလမ်းမှုလား၊
ရလဒ်ကို: လေ့လာမှုပြောဆိုချက်ကို၏စာရေးဆရာများကိုစုဝေးစေ data အားလုံးကိုအကြားတစ်ခုတည်းကစာရင်းအင်းသိသိသာသာဆက်စပ်တွေ့ပြီမှ:
"ကြားနေလှုံ့ဆော်မှုမှဆွေမျိုးသာယာသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှပိုကြီးသော P300 လွှဲခွင်ကွဲပြားမှု, ခဲ့ပါသည် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏အစီအမံများကိုအဆိုးဆက်စပ်ဒါပေမယ့်မရ hypersexuality ၏အတိုင်းအတာနှင့်ဆက်စပ်သော။ "
ဘာသာပြန်ချက်: porn မှ cue-reactivity ကို သာ. ကြီးမြတ်နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီတနာတစ်ဦး (သို့သော်မပေး masturbate မှအနိမ့်အလိုဆန္ဒ) နှင့်လိင်ဆက်ဆံရန်အနိမ့်အလိုဆန္ဒရှိခဲ့ပါတယ်။ အခြားသောလမ်းထားရန်: porn ပိုဦးနှောက်ကို Activation နှင့်မတရားသောနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီမဟုတ်ဘဲအမှန်တကယ်လူတစ်ဦးနှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံထက် porn မှ masturbate လိမ့်မယ်။ ဤသည်တွေ့ရှိချက်ဒီနိဂုံးချုပ်အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်သည်:
နိဂုံးချုပ်: အဖြစ် hypersexuality ကိုနားလည်ဘို့အကျိုးသက်ရောက်မှု မြင့်မားသောအလိုဆန္ဒစည်းစနစ်တကျမဟုတ်ဘဲဆွေးနွေးကြသည်။ ”
ဟမ်? အတူ correlating porn ပိုမို cue-reactivity ကိုဘယ်လိုလုပ်ခဲ့တယ် အနိမ့်အလိုဆန္ဒ တစ်ဦးနိဂုံးချုပ်ဟု hypersexuality ဖို့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးဆောင်နှင့်အတူလိင်ရှိသည်ဖို့အဖြစ်နားလည်သဘောပေါက်ထားရန်ဖြစ်ပါသည် မြင့်မားတဲ့အလိုဆန္ဒ, ဘယ်သူမှမသိပေမယ့်ဒီထူးဆန်းတဲ့အလှည့်အပြောင်းဟာခေါင်းကြီးပိုင်းအများစုအတွက်အခြေခံဖြစ်ခဲ့သည်။ ဆောင်းပါးတော်တော်များများကညစ်ညမ်းဆေးစွဲသူများ၏ ဦး နှောက်သည်မူးယစ်ဆေးစွဲသူများ၏ ဦး နှောက်ကို“ မကြည့်” ဘူးလို့လေ့လာမှုကဖော်ပြခဲ့တယ်။ သံမဏိ, et al။ , 2013 မျိုး၏ဘာမျှမကပြောပါတယ်။ ဤသည်ဒဏ္ဍာရီဟာနီကိုးလ် Prause သတင်းထုတ်ပြန်ချက်နှင့်သူမ၏အင်တာဗျူးကနေပေါ်ပေါက်။
ဤသည်မှာချို့ယွင်းချက် EEG လေ့လာမှု porn စွဲ (သို့မဟုတ်အခြားနည်းလမ်းလိင်စွဲ) ၏တည်ရှိမှုဆန့်ကျင်သက်သေအထောက်အထားအဖြစ်မီဒီယာမွှမ်းတင်ခံခဲ့ရသည်။ အဖြစ်မှန်မှာတော့ YBOP အတိုင်းဤလေ့လာမှု lists supporting porn စွဲ၏တည်ရှိမှု။ အဘယ်ကြောင့်? ဘာသာရပ်များညစ်ညမ်းဓါတ်ပုံနှင့်ထိတွေ့သောအခါအဆိုပါလေ့လာမှုပိုမိုမြင့်မား EEG ဖတ် (P300) ကဖော်ပြခဲ့သည်။ စွဲသူတို့ရဲ့စွဲလမ်းနှင့်ဆက်စပ်သော (ထိုကဲ့သို့သောပုံရိပ်တွေကဲ့သို့) တွေကိုထိတွေ့သည့်အခါတစ်ဦးကပိုမိုမြင့်မား P300 တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။
ထို့အပြင်လေ့လာမှု correlating porn အဘို့ သာ. ကြီးမြတ် cue-reactivity ကိုအစီရင်ခံတင်ပြ နည်းသော ပူးပေါင်းလိင်အဘို့အလိုဆန္ဒ။ ရိုးရှင်းစွာထားပါ: အဆိုပါလေ့လာမှုလိင်များအတွက်လျော့နည်းအလိုဆန္ဒ (သို့သော်မပေး porn မှ masturbating များအတွက်လျော့နည်းအလိုဆန္ဒ) နဲ့ပေါင်းစပ် porn အဘို့ သာ. ကြီးမြတ်ဦးနှောက်ကို Activation တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ မဟုတ်အတိအကျဘာခေါင်းကြီးပိုင်းတွင်ဖော်ပြထားပါသို့မဟုတ်စာရေးဆရာများမီဒီယာပြောဆိုထားသည်။
လူအများစုကလေ့လာမှုကိုဖတ်ရန်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ခဲ့ပြီးလူအများစုကမှားယွင်းသောခေါင်းစဉ်များနှင့်ထောက်ခံမှုမရှိသောတောင်းဆိုမှုများကို ၀ ယ်ယူသည်မှာရှင်းပါတယ် အောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အခြေအမြစ်မရှိသောတောင်းဆိုမှုများကိုဖျက်သိမ်းပြီးလေ့လာမှုမှအမှန်တကယ်တွေ့ရှိခဲ့သည့်အရာကိုဖော်ပြသည်။ နှင့် အဘယ်ကြောင့်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ဘယ်တော့မှမသငျ့သညျ။ ငါမီဒီယာအတွက်ပြဋ္ဌာန်းသုံးခုအဓိကတောင်းဆိုချက်များအမှာစကားပြောကြားပေးသောရေတိုဗားရှင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ အဆိုပါရှည်လျားသောဗားရှင်း သာ. ကြီးမြတ်အသေးစိတ်များနှင့်အများအပြားပိုပြီးကိုးကားပါရှိသည်။
၏ 8 peer-ပြန်လည်သုံးသပ်ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းယခုရှိပါတယ် သံမဏိ et al ။, 2013 ။ အားလုံးအောက်ပါ YBOP ဝေဖန်မှုနှင့်အတူ align။ စက္ကူ #1 ဖို့တစ်ခုတည်းကိုသာကျိန် ဆို. ပူဇော်ဖြစ်ပါသည် သံမဏိ et al ။ စာတမ်းများ 2-7 ခွဲခြားစိတ်ဖြာကဏ္ဍများဆံ့ သံမဏိ et al ။ , 2013:
'' အမြင့် Desire 'သို့မဟုတ်' ရုံ '' တစ်ဦးစွဲ? သံမဏိ et al မှတစ်ဦးကတုန့်ပြန်။ (2014), Donald L. ဟီလ်တန်အသုံးပြုပုံဂျူနီယာ, MD
peer-ပြန်လည်သုံးသပ်ဆန်းစစ်: "ဘာစွဲ၏ကနဦးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ: တစ်ဦးချင်းအားနည်း, စစ်ကူယန္တရားနှင့်ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောယန္တရား" (2019)
အပ်ဒိတ်: ဒီ 2018 တင်ဆက်မှုအတွက်ဂယ်ရီ Wilson က (ထိုနှစ်ခုနီကိုးလ် Prause EEG လေ့လာမှုများအပါအဝင်)5မေးခွန်းထုတ်စရာများနှင့်အထင်မြင်မှားစေသောလေ့လာမှုများနောက်ကွယ်မှအမှန်တရားဖျောထုတျ: porn သုတေသန: အဖြစ်မှန်သို့မဟုတ်ထူးအိမ်သင်?
နီကိုးလ်ပရာ့စ်က“ ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုမရှိ” ဟူသောသူတို့၏ပြောဆိုချက်ကိုထောက်ခံရန်အောက်ပါအချက်များကိုတင်ပြသည်။
In တီဗီအင်တာဗျူး နှင့်ထဲမှာ UCLA ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက် သုတေသီနီကိုးလ်ပရာ့စ်ကသူသည် ဦး နှောက်သည်အခြားစွဲလမ်းသူများကဲ့သို့တုန့်ပြန်မှုမရှိဟုဆိုသည်
ခေါင်းစဉ်များနှင့်လေ့လာမှု၏နိဂုံးချုပ်အရ“ hypersexuality” ကို“ နားလည်သဘောပေါက်ခြင်း” ဟုနားလည်ထားသည်။မြင့်မားသောအလိုဆန္ဒ"ဒါပေမယ့်လေ့လာမှုကပိုမို ဦး နှောက်ကိုတက်ကြွစေနိုင်သောအကြောင်းအရာများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများရှိသည်" ဟုဆိုသည် ဒီထက်အလိုဆန္ဒ လိင်အဘို့။
သံမဏိ et al ။ 2013 သည့်စောဒကတက်သည် ဆက်စပ်မှုမရှိခြင်း EEG ဖတ်ရှုခြင်းနှင့်အချို့သောမေးခွန်းလွှာများအကြားညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုမရှိခြင်းကိုဆိုလိုသည်။
ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုတစ်ခုလုံးကိုသင်ဖတ်နိူင်သော်လည်းအထက်တွင်ဖော်ပြထားသော ၁၊ ၂ နှင့် ၃ တွင်ကြည့်ပါ။
တောင်းဆိုပါ NUMBER ကို 1: ဘာသာရပ်များ၏ ဦး နှောက်တုန့်ပြန်မှုသည်အခြားစွဲသူများနှင့်ကွဲပြားသည် (ဥပမာအားဖြင့်ကိုကင်း) ။
အကယ်၍ သူတို့သည် အကယ်၍ အလွန်အကံျွလိင်ဆန်သောလိင်ဆက်ဆံမှုစွဲလမ်းမှုမှအမှန်တကယ်ခံရလျှင်သူတို့၏အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများကိုသူတို့၏ ဦး နှောက်တုန့်ပြန်မှုသည်ပိုမိုမြင့်မားမည်ဟုမျှော်လင့်နိုင်သည်။ ကိုကင်းဆေးစွဲသူများ၏ ဦး နှောက်သည်အခြားလေ့လာမှုများမှမူးယစ်ဆေးဝါး၏ပုံရိပ်များကိုတုန့်ပြန်ကြောင်းပြသသကဲ့သို့အလားတူပင်ဖြစ်သည်။ ”
သတင်းထောက်: "သူတို့ကအမျိုးမျိုးသောခေါ်ဆောင်သွားသောရုပ်ပုံများကိုပြသခဲ့ပြီးသူတို့၏ ဦး နှောက်၏လုပ်ဆောင်မှုကိုစောင့်ကြည့်ခဲ့သည်။ "
Prause- အကယ်၍ သင်သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများသည်စွဲလမ်းသည်ဟုထင်လျှင်၎င်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပုံများကိုပိုမိုကောင်းမွန်သောတုံ့ပြန်မှုမြင်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။ အကယ်၍ ၎င်းသည်ထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်စွမ်း၏ပြproblemနာဟုသင်ထင်လျှင်၎င်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပုံများကိုတုံ့ပြန်မှုများကျဆင်းလာလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်လိမ့်မည်။ ပြီးတော့ဒီဆက်ဆံရေးတစ်ခုမှကျွန်ုပ်တို့မတွေ့ရခြင်းကဒီပြproblemနာတွေရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုစွဲလမ်းမှုအဖြစ်ရှုမြင်ဖို့ကြီးကြီးမားမားအထောက်အပံ့မရှိဘူးလို့ပြသနေပါတယ်။
Prause: ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုပုံတူကူးယူသည်ဆိုပါကဤတွေ့ရှိချက်လိင် "စွဲ" ၏ရှိပြီးသားသီအိုရီတစ်ခုအဓိကစိန်ခေါ်မှုကိုယ်စားပြုလိမ့်မယ်။ ဤအတွေ့ရှိချက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်တင်ပြအကြောင်းပြချက်ကသူတို့ဦးနှောက်စွဲသူတို့ရဲ့မူးယစ်ဆေးအခြားစွဲကဲ့သို့ပုံရိပ်တွေတုံ့ပြန်ခဲ့ပါဘူးပြသသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
အထက်ပါဖော်ပြချက်များအရ ဦး နှောက်သည်“ အခြားစွဲလမ်းသူများကဲ့သို့တုံ့ပြန်မှုမပြုခဲ့” ဟုဆိုထားသည်။ ဤသည်အခိုင်အမာဘယ်နေရာမှာအမှန်တကယ်လေ့လာမှုမှာတွေ့ရှိခဲ့ခံရဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းကို Prause ၏အင်တာဗျူးများတွင်သာတွေ့နိုင်သည်။ ဒီလေ့လာမှုမှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေကိုကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာ EEG (P300) ဖတ်မှုပိုများလာပါတယ်။ စွဲသူများသည်သူတို့၏စွဲလမ်းမှုနှင့်ဆက်စပ်သောရုပ်ပုံများကိုကြည့်သည့်အခါဖြစ်ပျက်သောအရာဖြစ်သည်။ ကိုကင်းစွဲပေါ်မှာဤလေ့လာမှု).
အဆိုပါအောက်မှာမှတ်ချက် စိတ်ပညာယနေ့တွင် အင်တာဗျူး Prause ၏, ဂုဏ်ထူးဆောင်ယောဟနျသအေဂျွန်ဆင်ကပြောကြားခဲ့သည်အကြီးတန်းစိတ်ပညာပါမောက္ခ:
ရိုးရှင်းသော: ဘာသာရပ်များ၏ ဦး နှောက်သည်အခြားစွဲလမ်းသူများနှင့်ကွဲပြားသည်ဟုဆိုသည်မှာထောက်ခံမှုမရှိပါ။ တကယ်တော့ 2014 ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်ကလေ့လာမှု (Voon et al ။ 2013) Steel et al ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ သံမဏိ et al: နှင့်ဂျွန်ဆင်နှင့်အတူသဘောတူညီခဲ့ကြသည်။ ကြားနေဓါတ်ပုံတွေကို (ရန်ဆွေမျိုးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေတုံ့ပြန်ပိုမိုမြင့်မား P300 အစီရင်ခံတင်ပြကိုးကား 25) ။ အဆိုပါကင်းဘရစ်လေ့လာမှုမှ:
“ ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်များအရ dACC ၏လုပ်ဆောင်မှုသည်လိင်ဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏အခန်းကဏ္reflectကိုရောင်ပြန်ဟပ်သည်၊ ၎င်းသည်ဆန္ဒနှင့်ဆက်စပ်သော CSB ဘာသာရပ်များရှိ P300 နှင့်ပတ်သက်သောလေ့လာမှုနှင့်တူညီနိုင်သည်။  ...... P300 ၏လေ့လာမှုများ၊ ပစ္စည်းအသုံးပြုမှုပြdisနာများကိုဂရုပြုရန်ဘက်လိုက်မှုများကိုလေ့လာရန်အသုံးပြုသည့်ဖြစ်ရပ်နှင့်ဆက်စပ်သောအလားအလာရှိသောနီကိုတင်း ၊ အရက်  နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်ပတ်သက်သောမြင့်မားသောအစီအမံများပြသသည်။ တပ်မက်မှုညွှန်းကိန်း။ ” … ..ထို့ကြောင့်ယခင် CSB လေ့လာမှုကဖော်ပြခဲ့သည်ပစ္စုပ္ပန် CSB လေ့လာမှုနှင့် P300 လှုပ်ရှားမှုအတွက်နှစ်ဦးစလုံး dACC လှုပ်ရှားမှုအလားတူနောက်ခံဖြစ်စဉ်များကိုထင်ဟပ်စေခြင်းငှါ။ "
ဤ 2015 ယင်းမှ neuroscience စာပေပြန်လည်သုံးသပ်ရန် သံမဏိ et al အကျဉ်းချုံး။ (ကိုးကား 303):
"ဒါကြောင့်ဒီစာရေးဆရာများ  သူတို့ရဲ့လေ့လာမှု CSB ဖို့စွဲမော်ဒယ်များ၏လျှောက်လွှာကိုချေပကြောင်းပြောဆိုထားသည်, Voon et al ။ ဤအစာရေးဆရာများအမှန်တကယ်ဆိုပါတယ်မော်ဒယ်ထောက်ခံသက်သေအထောက်အထားများထောက်ပံ့ပေးကြောင်း posited ။
တောင်းဆိုပါ NUMBER ကို 2: ခေါင်းစီးများနှင့်လေ့လာမှု၏နိဂုံးချုပ်အရ“ hypersexuality” ကို“ နားလည်သဘောပေါက်ခြင်း” ဟုနားလည်ထားသည်။မြင့်မားသောအလိုဆန္ဒ"ဒါပေမယ့်လေ့လာမှုကပိုမို ဦး နှောက်ကိုတက်ကြွစေနိုင်သောအကြောင်းအရာများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများရှိသည်" ဟုဆိုသည် ဒီထက်အလိုဆန္ဒ လိင်အဘို့။
အင်တာဗျူးများနှင့်ဆောင်းပါးများတွင်သင်မဖတ်ခဲ့သောအချက်မှာလေ့လာမှုကဖော်ပြသည် အနုတ်လက္ခဏာဆက်စပ်မှု "ပူးပေါင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒမေးခွန်းများ" နှင့် P300 ဖတ်အကြား။ တနည်းအားဖြင့်သာ။ ကြီးမြတ် ဦး နှောက်ကို activation နှင့်ဆက်နွယ်နေကြောင်း ဒီထက်အလိုဆန္ဒ လိင်အတွက် (သို့သော်ညစ်ညမ်းမှတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖိစီးမှုမဟုတ်) Prause ၏အသုံးအနှုန်းကိုသတိပြုပါ ဒီအင်တာဗျူးထဲမှာ:
လိင်မှုဆိုင်ရာရုပ်ပုံများကို ဦး နှောက်၏တုန့်ပြန်မှုသည် hypersexuality ၏ကွဲပြားခြားနားသောမေးခွန်းပုံစံများဖြင့်ကြိုတင်မခန့်မှန်းနိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဦးနှောက်တုံ့ပြန်မှုသာအားဖြင့်ဟောကိန်းထုတ်ခဲ့သည် တစ်ဦးအတိုင်းအရှည် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏။ တစ်နည်းဆိုရသော်လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကို ဦး နှောက်ကွဲပြားမှုကိုမြင့်မားသောလိင်စိတ်ခံစားမှုထက်မကရှင်းပြသည်ဟုမထင်ရ။
Prause က "ဟုပြောသည်သတိပြုပါတစ်ဦးအတိုင်းအရှည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏ "မဟုတ်, က တစျခုလုံးကို လိင်ဆိုင်ရာဆန္ဒများစာရင်း” ။ မေးခွန်း ၁၄ ခုစလုံးကိုတွက်ချက်သောအခါဆက်စပ်မှုမရှိ၊ ခေါင်းစဉ်မရှိ။ ပို၍ ရှုပ်ထွေးစေသည့်အချက်မှာလေ့လာမှုခေါင်းစဉ်ဖြစ်သည် "လိင်ဆန္ဒ"အမှန်တကယ်တွေ့ရှိရသောအရာထက်အဆိုပါ SDI ကနေပူးပေါင်းလိင်အကြောင်းကိုရွေးချယ်ထားသောမေးခွန်းများကိုအတူအနုတ်လက္ခဏာဆက်စပ်မှု" အားလုံး SDI မေးခွန်းများကိုတွက်ချက်ကြသောအခါဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမဆက်စပ်"။
ဤတွင်ရဲ့ ယောဟနျသဂျွန်ဆင်ပါရဂူဘွဲ့မှတ်ချက် အဆိုပါ Prause အင်တာဗျူးအောက်မှာ:
"Prause အဖွဲ့က EEG တုံ့ပြန်မှုနဲ့စာရင်းအင်းဆိုင်ရာသိသာထင်ရှားတဲ့ဆက်စပ်မှုတစ်ခုကလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ယောက်နဲ့လိင်ဆက်ဆံချင်တဲ့ဆန္ဒနဲ့အဆိုးဆက်စပ်မှုဖြစ်တယ် (r = - ၃၃) ။ " တစ်နည်းပြောရရင်တော့, ခိုင်မာတဲ့ EEG တုံ့ပြန်မှုနှင့်အတူဘာသာရပ်များတနာတစ်ဦးနှင့်လိင်ဆက်ဆံဘို့အနိမ့်အလိုဆန္ဒရှိသည်ဖို့ erotica ရန်အဘို့အအနည်းငယ်စိတ်သဘောထားရှိ၏။ erotica အားကြည့်ရှုခြင်းအားပြtroubleနာရှိသည့်လူများ၏ ဦး နှောက်၏တုံ့ပြန်မှုသည်စွဲစွဲလမ်းမှုမြင့်မားသောလိင်စိတ်နှင့်စွဲလမ်းနေခြင်းရှိမရှိနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သို့ဆိုနိုင်မည်နည်း။ ”
တစ်ဦးကတစ်လလျှင်နောက်ပိုင်းမှာဆရာယောဟနျအေဂျွန်ဆင်ပါရဂူဘွဲ့တစ်ဦးပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ စိတ်ပညာယနေ့တွင် blog post: Prause ရဲ့ EEG လေ့လာမှုနှင့်သူပြtheနာရဲ့နှစ်ဖက်စလုံးတွင်ဘက်လိုက်မှုအဖြစ်ရှုမြင်ပုံ။ နီကိုးလ်ပရပ်စ် (အမည်မသိသူ) သည်ဤ YBOP ဝေဖန်မှုနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်ဂျွန်ဆင်အားတာဝန်ယူရန်အောက်တွင်ပြောကြားခဲ့သည်။ ဂျွန်ဆင်ကပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည် အောက်ပါမှတ်ချက် အရာအဘို့ Prause အဘယ်သူမျှမတုန့်ပြန်ခဲ့:
ရိုးရှင်းသော: EEG ဖတ်ခြင်းနှင့်လိင်မှုဆိုင်ရာဆန္ဒ ၁၄ ခုပါသောမေးခွန်း ၁၄ ခုအကြားဆက်စပ်မှုမရှိပါ။ နှုတ်ဆက်လေ့လာမှုခေါင်းစဉ်နှင့်ခေါင်းစဉ်များ။ အပြုသဘောဆက်နွယ်မှုရှိနေလျှင်တောင်မှ“ မြင့်မားသောဆန္ဒ” သည်“ စွဲလမ်းမှု” မှနှစ် ဦး နှစ်ဖက်သီးသန့်သီးသန့်တည်ရှိသည်ဟူသောပြောဆိုချက်သည်ရှုပ်ထွေးသည်။ အမှတ်ဖို့ပို, P300 ဖတ်ခဲ့ကြသည် အနုတ်လက္ခဏာ ဆက်နွယ်နေကြောင်း တစ်ဖက်နှင့်အတူလိင်အဘို့အလိုဆန္ဒနှင့်အတူ - (33, r = ။ ) ။ ရိုးရိုးလေးဆိုရလျှင် - porn ပိုမို cue-reactivity ကိုသူဘာသာရပ်များတကယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးနှင့်လိင်ဆက်ဆံဘို့လျော့နည်းဆန္ဒရှိခဲ့ပါတယ်။
ဤစာရင်းကိုကြည့်ပါ - လေ့လာမှုများအရလိင်နှင့်ညစ်ညမ်းသောစွဲသူများသည်“ မြင့်မားသောလိင်ဆန္ဒရှိ” သည်ဟုဆိုကြသည်။
တောင်းဆိုပါ NUMBER ကို 3: ဘာသာရေး 'EEG ဖတ်ခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်မှုစကေးရှိဘာသာရပ်များ' ရမှတ်များအကြားဆက်စပ်မှုမရှိခြင်းကြောင့်ညစ်ညမ်းသောအကျင့်စွဲခြင်းမရှိပါ။
အဆိုပါ ဆက်စပ်မှုမရှိခြင်း EEG နှင့်မေးခွန်းများအကြားအလွယ်တကူအများအပြားအချက်များအားဖြင့်ရှင်းပြခဲ့သည်:
1) အဆိုပါဘာသာရပ်များခဲ့ကြသည်7Non-လိင်ကွဲအပါအဝင်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး,ဒါပေမယ့်အားလုံးစံ, ဖြစ်နိုင်သည်စိတ်မဝင်စား, အထီး + အမျိုးသမီးပုံရိပ်တွေကိုပြသခဲ့ကြသည်။ ဤသည်တစ်ဦးတည်းမဆိုတွေ့ရှိချက် discounts ။ အဘယ်ကြောင့်?
ခိုင်လုံသောဆေးစွဲခြင်း ဦး နှောက်လေ့လာမှုများတွင်တူညီသောလိင်၊ တူညီသောအသက်အရွယ်နှင့်အိုင်ကျူနှင့်အတူလိင်တူချင်း၊
သုတေသီများကလိင်မတူသောသူများကိုသာစမ်းသပ်မှုတစ်ခုအနေဖြင့်လိင်တူချင်းလိင်မှုဆိုင်ရာလိင်မှုကိစ္စပြုခြင်းကိုမည်သို့အပြစ်တင်မည်နည်း။ ထို့နောက် (ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်သည့်) ဆက်စပ်မှုမရှိခြင်းမှကြီးမားသောကောက်ချက်ဆွဲနိုင်မည်လား။
2) အဆိုပါဘာသာရပ်များ Pre-ပြကြဘူး။ သက်တမ်းရှိစွဲဦးနှောက်လေ့လာမှုများ Pre-ရှိပြီးသားအခြေအနေများ (စိတ်ကျရောဂါ, OCD အခြားစှဲ, etc) အတွက်တစ်ဦးချင်းစီပြ။ ယင်းကိုကြည့်ပါ ကင်းဘရစ်လေ့လာမှု သင့်လျော်သောစိစစ် & နည်းစနစ်၏ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။
3) ဘာသာရပ်များပြင်းထန်ထံမှအတော်လေးအသေးစားရန်, compulsive porn အသုံးပြုမှုအမျိုးမျိုးဒီဂရီခံစားခဲ့ရသညျ။ Prause ထံမှတစ်ဦးကကိုးကား:
"ဒီလေ့လာမှုမှာပြသနာတွေကိုတင်ပြတဲ့သူတွေ၊ အသေးစားကနေကြီးမားတဲ့ပြသနာတွေအထိ၊ အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုတွေကိုကြည့်ရှုသူတွေကိုပါပါဝင်ခဲ့တယ်။ "
ဤအချက်တစ်ခုတည်းကကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်သည့်နည်းလမ်းဖြင့်ဆက်နွယ်မှုမရှိသောရလဒ်အမျိုးမျိုးကိုရှင်းပြနိုင်သည်။ ခိုင်လုံသောစွဲ ဦး နှောက်လေ့လာမှုများသည်ဆေးစွဲသူများနှင့်အုပ်စုလိုက်မဟုတ်သောစွဲသူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်သည်။ ဒီလေ့လာမှုမှာလည်းမရှိခဲ့ပါ။
4) SCS (Sexual Compulsivity Scale) သည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုစွဲစွဲလမ်းမှုအတွက်သို့မဟုတ်အမျိုးသမီးများအတွက်မှန်ကန်သောအကဲဖြတ်စစ်ဆေးမှုမဟုတ်ပါ။ ၎င်းကို ၁၉၉၅ ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး၊ ဆက်ဆံရေး စိတျထဲမှာကို (AIDS ရောဂါကပ်ရောဂါစုံစမ်းစစ်ဆေးနှင့် ဆက်စပ်. ) ။ အဆိုပါ SCS ပြောပါတယ်:
ထို့အပြင် SCS ရဲ့ developer ဒီ tool အမျိုးသမီး psychopathology မပြလိမ့်မည်ဟုသတိပေးလိုက်သည်,
"လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive ရမှတ်များနှင့် psychopathology ၏အခြားအမှတ်အသားများအကြားအသင်းယောက်ျားနှင့်မိန်းမတို့အဘို့ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများပြသ; လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive ယောက်ျားအတွက်မဟုတ်ဘဲအမျိုးသမီး psychopathology ၏အညွှန်းကိန်းနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ "
အဆိုပါ SCS, ဒုတိယမေးခွန်းလွှာ (ကဲ့သို့ပင်CBOSB) အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုအသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းများမရှိပါ။ ဒါဟာ "hypersexual" ဘာသာရပ်များနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများထိန်းချုပ်မှုထဲက screening ရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သည်။
ရိုးရှင်းသော: ခိုင်လုံသောစွဲချက်“ ဦး နှောက်လေ့လာမှု” တွင် - ၁) တစ်သားတည်းဖြစ်တည်မှုဘာသာရပ်များနှင့်ထိန်းချုပ်မှုများ၊ (၂) အခြားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများနှင့်စွဲလမ်းမှုအတွက်မျက်နှာပြင်၊ ၃) ခိုင်လုံသောမေးခွန်းများနှင့်အင်တာဗျူးများကို အသုံးပြု၍ ဘာသာရပ်များသည်အမှန်တကယ်စွဲလမ်းသူများဖြစ်သည်။ porn အသုံးပြုသူများအပေါ်ဤ EEG လေ့လာမှုသည်ဤအဘယ်သူမျှမလုပ်ခဲ့တယ်။ ဤသည်တစ်ခုတည်းသာလေ့လာမှုရဲ့ရလဒ်များကိုလျှော့။
လေ့လာခြင်း သံမဏိ et al ။ , ၂၀၁၃ ခုနှစ်စာပေ၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်သုံးသပ်ချက်မှ - အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစွဲ၏ neuroscience: တစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် Update ကို (2015)
အင်တာနက်ညစ်ညမ်း၎င်းတို့၏ကြည့်ထိန်းညှိပြဿနာများ၏ဝေဖန်ပြောဆိုသူတွေကိုတခုတခုအပေါ်မှာ EEG လေ့လာမှု [လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုဖို့အာရုံကြော reactivity ကိုအစီရင်ခံထားသည်303] ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ images နဲ့ hypersexuality နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏မေးခွန်းလွှာအစီအမံကြည့်ရှုသည့်အခါအဆိုပါလေ့လာမှု ERP amplitude အကြားဆက်ဆံရေးဆန်းစစ်ဖို့ဒီဇိုင်းခဲ့သည်။ အဆိုပါစာရေးဆရာ [hypersexuality မေးခွန်းအပေါ်ရမှတ်များအကြားဆက်စပ်မှု၏မရှိခြင်းနိဂုံးချုပ်ခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေကြည့်ရှုသည့်အခါ "ရောဂါဗေဒ hypersexuality ၏မော်ဒယ်များအထောက်အပံ့ပေးရန်ပျက်ကွက်" P300 amplitude ကိုဆိုလိုတာ303] (စ။ 10) ။ သို့သော်ဆက်စပ်မှုမရှိခြင်းပိုကောင်းနည်းစနစ်အတွက်ပွဲတစ်ပွဲအားနည်းချက်တွေကိုအားဖြင့်ရှင်းပြခဲ့နိုင်ပါသည်။ ဥပမာ, ဒီလေ့လာမှုတစ်ပင်သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောဘာသာရပ်ရေကူးကန် (7 Non-လိင်ကွဲအပါအဝင်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်း,) ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုမှစွဲ၏ဦးနှောက်တုံ့ပြန်မှုနှိုင်းယှဉ် Cue-reactivity ကိုလေ့လာမှုများတရားဝင်ရလဒ်များကိုရှိသည်ဖို့တသားတည်းဘာသာရပ်များ (အတူတူလိင်, အလားတူအသက်အရွယ်) လိုအပ်သည်။ porn စွဲလေ့လာမှုများမှတိကျသောကြောင့်ကောင်းစွာယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်း [ဆင်တူအမြင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှဦးနှောက်နှင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတုံ့ပြန်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်လေးမြတ်ကွာခြားမြဲမြံစွာတည်င့်304,305,306] ။ ထို့အပြင်အဆိုပါစိစစ်မေးခွန်းနှစ်ခုစွဲ IP ကိုအသုံးပြုသူများအတွက်အတည်ပြုကြပြီမဟုတ်, နှင့်ဘာသာရပ်များစွဲသို့မဟုတ်စိတ်ဓါတ်များမမှန်၏အခြားသရုပ်များအတွက်ပြမခံခဲ့ရပါ။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့စက္ကူ (ကြားနေဓါတ်ပုံတွေကိုမှဆွေမျိုးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံများ, မှပိုမိုမြင့်မား P300 လွှဲခွင်) ၏သိသာထင်ရှားသောတွေ့ရှိချက်ဆွေးနွေးအပိုင်းအတွက်အနည်းငယ်မျှသာအာရုံစိုက်မှုပေးထားသည်။ သူတို့ရဲ့စွဲလမ်းနှင့်ဆက်စပ်အမြင်အာရုံတွေကိုထိတွေ့သည့်အခါပစ္စည်းဥစ္စာများနှင့်အင်တာနက်ကိုစွဲနှင့်အတူတစ်ဘုံတွေ့ရှိချက်ကြားနေလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုတိုးလာ P300 လွှဲခွင်ဆွေမျိုးဖြစ်သကဲ့သို့ဤသည် [, မမျှော်လင့်ဘဲဖြစ်ပါတယ်308] ။ တကယ်တော့, Voon, et al ။  ဒီကြိုတင်လေ့လာမှုရဲ့ P300 တွေ့ရှိချက်ကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာသူတို့ရဲ့ဆွေးနွေးမှု၏အပိုင်းတစ်ခုမြှုပ်နှံ။ Voon et al ။ နိဂုံးချုပ်, အထူးသဖြင့်ထူထောင်စွဲမော်ဒယ်များပတ်သတ်ပြီးအတွက်သံမဏိစက္ကူအတွက်ထောက်ပံ့ပေးမပေး P300 ၏အရေးပါမှု၏ရှင်းပြချက်ကို, ပေး,
ထို့ကြောင့်ပစ္စုပ္ပန် CSB လေ့လာမှုမှာ dACC လှုပ်ရှားမှုနှင့်ယခင် CSB လေ့လာမှုကဖော်ပြခဲ့သည် P300 လှုပ်ရှားမှုနှစ်ခုလုံး  အာရုံကိုဖမ်းအလားတူနောက်ခံဖြစ်စဉ်များကိုထင်ဟပ်စေနိုင်သည်။ အလားတူပင်နှစ်ဦးစလုံးလေ့လာမှုများတိုးမြှင်အလိုဆန္ဒနှင့်အတူဤအအစီအမံများအကြားတစ်ဦးဆက်စပ်မှုကိုပြ။ ဤတွင်ကျနော်တို့ dACC လှုပ်ရှားမှုတဏှာ၏အညွှန်းကိန်းကိုထင်ဟပ်စေခြင်းငှါအရာ, အလိုဆန္ဒနှင့်ဆက်နွယ်နေပါသည်, ဒါပေမယ့်စွဲလမ်းတစ်ခုမက်လုံးပေး-salience မော်ဒယ်ပေါ်ရဲ့သဘောထားအကြံပြုချက်များ like နှိပ်နှင့်အတူမပတျသကျဘူးကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။  (စ။ 7)
[ဤစာရေးဆရာများအနေဖြင့်ဒါ303] သူတို့ရဲ့လေ့လာမှု CSB, Voon et al ဖို့စွဲမော်ဒယ်များ၏လျှောက်လွှာကိုချေပပြောဆိုထားသည်။ ဤစာရေးဆရာများတကယ်ကဆိုပါတယ်မော်ဒယ်ထောက်ပံ့သက်သေအထောက်အထားပေးကြောင်း posited ။
လေ့လာမှုခေါင်းစဉ်နှင့်ခေါင်းစီးများများစွာတို့က“ လိင်မှုဆိုင်ရာဆန္ဒ” အကြားဆက်စပ်မှု (ဆက်စပ်မှု) ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်ဟုဖော်ပြထားသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Desire Inventory နှင့် EEG ဖတ်ပါ။ ကျွန်တော်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်အရာအားလုံးကိုအရ, SDI တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် 14-မေးခွန်းတစ်ခုကိုစမ်းသပ်။ မေးခွန်း (၉) ခုသည် (“ dyadic”) လိင်ဆန္ဒနှင့်လိပ်စာလေးခု (တစ်ကိုယ်တည်းဖြစ်သော) လိင်အလိုဆန္ဒကိုဖြေရှင်းသည်။ ရှင်းလင်းချက်အတွက်လေ့လာမှု၏ အနုတ် ဆက်စပ်မှုကိုသာနှင့်အတူမှီခဲ့သည် ပူးပေါင်း အဆိုပါ SDI ကနေလိင်မေးခွန်းများကို။ P300 ဖတ်အကြားမျှအရေးပါသောဆက်စပ်မှုရှိပါတယ်ခဲ့ အားလုံး အဆိုပါ SDI အပေါ်မေးခွန်းများကို။ အဆိုပါလေ့လာမှု၏စိတ္တဇထံမှယူ:
ရလဒ်: ကြားနေလှုံ့ဆော်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်သာယာသောလိင်မှုနှိုးဆွမှုများနှင့်ပိုမိုကြီးမားသော P300 လွှဲခွင်ကွဲပြားမှုများ၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏အစီအမံများကိုအဆိုးဆက်စပ်ခဲ့သည်ဒါပေမယ့်မရ hypersexuality ၏အတိုင်းအတာနှင့်ဆက်စပ်သော။ "
ဘာသာပြန်ခြင်း - ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုတုန့်ပြန်မှုပိုမိုကောင်းမွန်သော EEG များကလိင်ကြင်ဖော်ဖက်နှင့်လိင်ဆက်ဆံလိုသည့်ဆန္ဒကိုအလျှော့ပေးခဲ့သည်။ နောက်တစ်နည်းပြောရရင် သာ. ကြီးမြတ် cue-reactivity ကို ဆက်နွယ်နေကြောင်း လိင်ရှိသည်ဖို့လျော့နည်းအလိုဆန္ဒ (သေးသေးသ porn မှ masturbate ခွေငျးငှာအလိုရှိသော) ။ သို့သော်လည်းအလွန်လာမည့်ဝါကျအလှည့် လိင်အဘို့အနိမ့်အလိုဆန္ဒ သို့တနာတစ်ဦးနှင့်အတူ မြင့်သော လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ:
နိဂုံးfor: အကျိုးသက်ရောက်မှု hypersexuality နားလည်ခြင်း မြင့်မားသောအလိုဆန္ဒအတိုင်း, အစား disorders ထက်ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
သံမဏိ et al ယခုသူတို့တကယ်တွေ့ဟုဆိုကာဖြစ်ပါတယ် မြင့်မားသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ အတူ correlating ပိုမိုမြင့်မားသော P300 ဖတ်? ကောင်းပြီ၊ အဲဂျွန်ဂျွန်ဆင်ပါရဂူဘွဲ့ပြောခဲ့သလိုပါပဲ ဒီ peer-ပြန်လည်သုံးသပ်ဝေဖန်ပြောဆိုမှုများ:
'' ဒီတစ်ခုတည်းကစာရင်းအင်းသိသိသာသာတွေ့ရှိချက်စွဲအကြောင်းကိုဘာမျှကပြောပါတယ်။ ထို့အပွငျ, ဒီသိသာတွေ့ရှိချက်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် တစ်ဖက်နှင့်အတူလိင်များအတွက် P300 နှင့်အလိုဆန္ဒအကြားနှုတ်လက္ခဏာဆောင်သောဆက်စပ်မှု (r = -0.33), P300 လွှဲခွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒကိုလျှော့ချရန်နှင့်ဆက်စပ်သောကြောင်းညွှန်ပြ; ဒီကိုတိုက်ရိုက်မြင့်မားသောအလိုဆန္ဒအတိုင်း P300 ၏အနက်ကိုဆန့်ကျင်။ အခြားအစှဲလမျးသူအုပ်စုများမှမနှိုင်းယှဉ်ရှိပါတယ်။ အုပ်စုများကိုထိန်းချုပ်ရန်မနှိုင်းယှဉ်ရှိပါတယ်။ သုတေသီများကရေးဆွဲအဆိုပါကောက်ချက် '' ဒုက္ခလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေ၎င်းတို့၏ကြည့်ထိန်းညှိသတင်းပို့သူတွေကိုရှိသည်သို့မဟုတ်ဦးနှောက်ကိုကင်းအလားတူတုံ့ပြန်မှုသို့မဟုတ်စွဲတခြားမျိုးရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးရှိမရှိနှင့် ပတ်သက်. ဘာမျှမပြောပါသောအချက်အလက်များ, ကနေကွမ်တမ်ခုန်ဖြစ်ကြသည်
အဘယ်ကြောင့် John Johnson သည် Steel et al ကိုစာရေးသူများနှင့်အခြားသူများကိုသတိပေးရန်လိုသနည်း။ အမှန်တကယ် "လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒပြင်းပြ" ထက် "လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ယောက်နဲ့လိင်ဆက်ဆံချင်တဲ့ဆန္ဒ" ကိုအမှန်တကယ်တွေ့ရှိခဲ့သလား။ သံမဏိ et al အများစုကြောင့်ဖြစ်သည်။ နှင့်မီဒီယာ blitz ကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှင့်ဆက်စပ်နေသည်ဟုဆိုလိုသည်။ အဆိုပါစိတ္တဇထံမှယူနိဂုံး:
ကောက်ချက်for: အကျိုးသက်ရောက်မှု hypersexuality အဖြစ်မြင့်မားသောအလိုဆန္ဒနားလည်သဘောပေါက်, အစားမမှန်မှုများထက်ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
ဘာတဲ့? သို့သော်လေ့လာမှု သာ. ကြီးမြတ် cue-reactivity ကိုအတူဘာသာရပ်များခဲ့ကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည် တစ်ဖက်နှင့်အတူလိင်အဘို့အနိမ့်အလိုဆန္ဒ.
ထို့အပြင်လေ့လာမှုတွင်“ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ” ဟူသောစကားစုကို ၆၃ ကြိမ်ထပ်ခါတလဲလဲပြုလုပ်ပြီးလေ့လာမှု၏ခေါင်းစဉ် (Sexual Desire, Hypersexuality …။ ) သည်ပိုမိုများပြားသော ဦး နှောက်ကိုလိင်ဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ လေ့လာမှုကိုဖတ်ပါ ပြည့်သော နိဂုံးချုပ်နှငျ့သငျလှနျးစာရေးသူမဟုတ်ဘဲအနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒထက်ပိုမိုမြင့်မားကိုတွေ့ယူဆလိမ့်မယ်:
မေးခွန်းဖြင့်တိုင်းတာအဖြစ်နိဂုံးချုပ်မှာတော့အလားတူလှုံ့ဆော်မှု၎င်းတို့၏ကြည့်ထိန်းညှိမယ့်နမူနာအစီရင်ခံပြဿနာများအတွက်အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် Non-လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှအာရုံကြော reactivity ကို၏ပထမဦးဆုံးအတိုင်းအတာ, ရောဂါဗေဒ hypersexuality ၏မော်ဒယ်များအထောက်အပံ့ပေးရန်ပျက်ကွက်။ အထူးသ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ကြားနေလှုံ့ဆော်မှုများအကြား P300 window တွင်ခြားနားချက်များခဲ့ကြသည် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒအားဖြင့်ခန့်မှန်းဒါပေမယ့်မရ hypersexuality ၏ (သုံး) မဆိုအတိုင်းအတာဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒပါလျှင် အများဆုံးပြင်းပြင်းထန်ထန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှအာရုံကြောတုံ့ပြန်မှုခန့်မှန်းထားသည်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏စီမံခန့်ခွဲမှု, သေချာပေါက် hypersexuality ၏အဆိုပြု concomitants အချို့ကိုဖြေရှင်းခြင်းမရှိဘဲ, များအတွက်ထိရောက်သောနည်းလမ်းဖြစ်စေခြင်းငှါ, စိတ်ပျက်စရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားချက်တွေကိုသို့မဟုတ်အပြုအမူကိုလျှော့ချ။
ဘယ်နေရာမှာငါတို့မြင်ကြပါ အနိမ့် လိင်ဆန္ဒ အဲဒီအစားကျွန်တော်တို့ကိုပေးထားတယ် -လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒအားဖြင့်ခန့်မှန်း " နှင့် “ လိင်ဆန္ဒကိုစီမံခြင်း” နှင့် "စိတ်ပျက်ဖွယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားချက်များသို့မဟုတ်အပြုအမူများကိုလျှော့ချခြင်း။ " လေ့လာမှုညှို့စာဖတ်သူများကယ့်ကိုကိုယ့်မြင့်မားတဲ့လိင်စိတ်ခဲ့ porn စွဲယုံကြည်သို့ပြု Prause ၌ဤ meme အားဖြည့်မသာ သူမ၏အင်တာဗျူးအတွက်: (အသုံးအနှုန်းသတိပြုပါ)
လိင်မှုဆိုင်ရာရုပ်ပုံများကို ဦး နှောက်၏တုန့်ပြန်မှုသည် hypersexuality ၏ကွဲပြားခြားနားသောမေးခွန်းပုံစံများဖြင့်ကြိုတင်မခန့်မှန်းနိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဦးနှောက်တုံ့ပြန်မှုသာအားဖြင့်ဟောကိန်းထုတ်ခဲ့သည် တစ်ဦးအတိုင်းအရှည် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏။ တနည်းအားဖြင့် hypersexuality လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုအတွက်ဦးနှောက်ကွဲပြားခြားနားမှုရှင်းပြဖို့ပေါ်လာပါဘူး ရုံမြင့်မားသောလိင်စိတ်ရှိခြင်းထက်မဆိုပို။"
ချီးမွမ်းခြင်းကို "a အတိုင်းအတာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏ "တစ်ခုလုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ Inventory" က။ မေးခွန်း ၁၄ ခုစလုံးကိုတွက်ချက်သောအခါဆက်စပ်မှုမရှိပါ၊ ဇောက်ထိုးလှည့်ရန်ခေါင်းစဉ်မရှိပါ။ ချီးကျူးထောင့်ကသူမထပ်တူပြောဆိုသည် UCLA ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်:
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပုံများကို ဦး နှောက်၏တုန့်ပြန်မှုသည် hypersexuality ၏မေးခွန်းလွှာသုံးခုမှမည်သည့်ကြိုတင်မှန်းဆခြင်းမခံခဲ့ရပါ။ “ဦးနှောက်တုံ့ပြန်မှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏အတိုင်းအတာသာဆက်စပ်ခဲ့သည်. တနည်းအားဖြင့် hypersexuality နောက်တဖန်မယ့်မြင့်မားတဲ့လိင်စိတ်ရှိခြင်းထက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေမှဦးနှောက်တုံ့ပြန်မှုရှင်းပြဖို့ပေါ်လာပါဘူး။"
တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုနှစ်ခုလုံးတွင်ပိုမိုမြင့်မားသော P300 ဖတ်ခြင်းသည်ပိုမိုမြင့်မားသော libido နှင့်ဆက်စပ်သည်ဟုအကြံပြုသည်။ မီဒီယာမှလူတိုင်းကဝယ်ယူခဲ့သည်။ တွေ့ရှိချက်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစား, Steele et al ။ ခေါ်သင့်တယ်ပူးပေါင်းလိင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတွေနှင့်အတူနှုတ်လက္ခဏာဆောင်သောဆက်စပ်မှု, အားလုံး SDI မေးခွန်းများကိုတွက်ချက်ကြသောအခါဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမဆက်စပ်"။
ရိုးရှင်းသော: Cue-reactivity ကို (P300 ဖတ်) ခဲ့ကြ အနုတ်လက္ခဏာ တစ်ဖက်နှင့်အတူလိင်အဘို့အလိုဆန္ဒနှင့်အတူ - (33 ။ r =) ဆက်နွယ်နေကြောင်း။ ရိုးရှင်းစွာထားပါ: လိင်အဘို့လျော့နည်းဆန္ဒ porn အဘို့ သာ. ကြီးမြတ် cue-reactivity ကိုဆက်နွယ်နေကြောင်း။ ယေဘုယျအားဖြင့် EEG ဖတ်ရှုမှုနှင့် ၁၄ ခုပါသောလိင်ဆန္ဒအပေါ်စာရင်းတစ်ခုအကြားဆက်စပ်မှုမရှိပါ။ အပြုသဘောဆက်နွယ်မှုရှိနေလျှင်ပင်“ မြင့်မားသောဆန္ဒ” သည်“ စွဲလမ်းမှု” မှနှစ် ဦး နှစ်ဖက်သီးသန့်သီးသန့်တည်ရှိသည်ဟူသောပြောဆိုချက်သည်ရှုပ်ထွေးသည်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်လေ့လာမှုတွင် SDI နှင့် ပတ်သက်၍ အမှားအယွင်းနှစ်ခုရှိကြောင်းသတိပြုပါ။ လေ့လာချက်ကိုးကားသည်:
"အဆိုပါ SDI အသုံးပြု. လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏အဆင့်ဆင့်တိုင်းတာ နှစ်ခုအကြေးခွံ ၏ရေးစပ် ခုနစျပါးပစ္စည်းတစ်ခုချင်းစီကို."
တကယ်တော့ခုနှစ်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Desire Inventory ပါဝင်ပါသည် ကိုးမေးခွန်းများကိုပူးပေါင်း, လေးတိုက်ပိတ်ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုs ကိုနှင့် မေးခွန်းတစ်ခု ကြောင်း (#14) ခွဲခြားမရနိုင်ပါ။
ဒုတိယအချက်မှာအမှား: ဇယား ၂ ကတိုက်ပိတ်စစ်ဆေးမှုအမှတ်သည်“ ၃-၂၆” ဖြစ်ပြီး၊ ၂၆.၄၆ ပါ။ ဘာဖြစ်သွားတာလဲ? အထီးကျန်လိင်မေးခွန်းများ (၁၀-၁၃) တွင်“ ၃၁” ရနိုင်သည့်ရမှတ်ကိုထည့်သွင်းထားသည်။
ဤလေ့လာမှု၏ထုတ်ဝေလိုက်ပါသွားသောသွက်မီဒီယာ blitz, တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း SDI ရလဒ်များကိုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်မှု-ဖမ်းဆုပ်ခေါင်းကြီးပိုင်းတွင် bases ။ သို့သော်လည်းလေ့လာမှုရေး-up, သုတေသီအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချမှုပေးသွားနိုင်ကြဘူးသော SDI ကိုယ်တိုင်ကခန့်ထင်ရှားတဲ့အမှားအယွင်းများပါရှိသည်။
အမြင့် Desire စွဲနှင့်အတူနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်သီးသန့်ဖြစ်သနည်း
ပေမဲ့ သံမဏိ et al ။ အမှန်တကယ်အစီရင်ခံ နည်းသော cue-reactivity နှင့်ဆက်နွှယ်သောပူးပေါင်းပါ ၀ င်သောလိင်မှုဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၊ “ မြင့်မားသောလိင်ဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ” သည်လိင်အရစွဲလမ်းမှုအတွက်အပြန်အလှန်သီးသန့်ဖြစ်သည်ဟုမယုံနိုင်လောက်အောင်ပြောဆိုရန်အရေးကြီးသည်။ အခြားစွဲလမ်းမှုအပေါ်အခြေပြုသည့်ယူဆချက်ကိုစဉ်းစားပါကယင်း၏ဆင်ခြင်တုံတရားကင်းမဲ့မှုကိုထင်ရှားစေသည် (ပိုမိုအဘို့ဤဝေဖန်မှုကိုကြည့်ပါ သံမဏိ et al။ - မြင့်မားသောအလိုဆန္ဒ 'သို့မဟုတ်' မျှသာ '' တစ်ဦးစွဲ? မှတစ်ဦးကတုန့်ပြန် သံမဏိ et al။ , Donald အယ်လ်ဟီလ်တန်, Jr. အားဖြင့် MD ။.)
ဥပမာအားဖြင့်, ထိုကဲ့သို့သောယုတ္တိဗေဒ morbidly, အဝလွန်စားသုံးခြင်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်း, ထိုသို့အကြောင်းကိုအလွန်အမင်းမပျော်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်း, ရိုးရှင်းစွာတစ်ကြောင်းဆိုလိုတာ "အစာအဘို့အမြင့်မားသောအလိုဆန္ဒ?" နောက်ထပ် Extrapolating, တဦးတည်း, အရက်သမားရိုးရှင်းစွာအရက်အဘို့အမြင့်မားသောအလိုဆန္ဒရှိသည်ကောက်ချက်ချရပါမည် ညာဘက်? တိုတိုမှာတော့အားလုံးစွဲထိုကဲ့သို့သောလုပ်ဆောင်မှုများသူတို့ရဲ့ခံစားမှုကြောင့်အခြားအစွဲ-related ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများကို (desensitization) ပယ်ချပင်အခါ, ( "ာင်း" ဟုခေါ်) သူတို့ရဲ့စွဲလမ်းတ္ထုများနှင့်လှုပ်ရှားမှုများအတွက် "မြင့်မားသောအလိုဆန္ဒ" ရှိသည်။
အများစုကစွဲကျွမ်းကျင်သူများကစွဲ၏အဓိကအမှတ်အသားဖြစ်ဖို့ "အနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များကြားမှဆက်လက်သုံးစွဲခြင်း" စဉ်းစားပါ။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, တစ်စုံတစ်ဦးက porn-သွေးဆောင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုရှိသည်နှင့်သူ၏မိခင်ရဲ့မြေအောက်ခန်းရှိသူ၏ကွန်ပျူတာကျော်လွန်စွနိုင်ခြင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သို့သျောလညျးဤသုတေသီများအဆိုအရနေသမျှကာလပတ်လုံးသူညွှန်ပြအဖြစ် "မြင့်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ" ဟုသူကမျှမစွဲလမ်းရှိပါတယ်။ ဤသည်ပါရာဒိုင်းလက္ခဏာတွေနှင့်အပြုအမူအပါအဝင်စွဲအကြောင်းကိုလူသိများအရာအားလုံး, လျစ်လျူရှု အားလုံးစွဲနေဖြင့် sharedထိုကဲ့သို့သောပြင်းထန်အနုတ်လက္ခဏာဂယက်ရိုက်, အသုံးပြုမှုကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းမရှိခြင်း, မတရားသော, etc အဖြစ်
ဒီလေ့လာမှုက "မြင့်မားသောအလိုဆန္ဒ" ၏မည်သည့်အတိုင်းအတာ, သို့သော်မေးခွန်းထုတ်စရာ, စွဲကနေကိုယ်ခံစွမ်းအားပေးသောထူးခြားတဲ့ယုတ္တိဗေဒအပေါ်အခြေခံပြီးလေ့လာမှုများ၏အဖု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလား ကနေဒါနိုင်ငံမှလိင်ပညာရှင်တစ် ဦး သည် ၂၀၁၀ ခုနှစ်စာတမ်း၌ဤရုပ်ပုံကိုပန်းချီဆွဲရန်ကြိုးပမ်းခဲ့သည်။ Dysregulated လိင်နှင့်မြင့်မားသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ: ကွဲပြား Construction? သတိပြုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစှဲများအတွက်ကုသမှုရှာသောသူကလူ dysregulated လိင်နှင့်မြင့်မားသောအလိုဆန္ဒနှစ်ခုစလုံးကိုသတင်းပို့အကြောင်း, သူရဲဝံ့စွာကောက်ချက်ချ:
ယခုလေ့လာမှု၏ရလဒ်များအရလိင်ခွဲခြားမှုအားနည်းသောလိင်မှုသည်လက်ရှိအယူအဆ၊ တံဆိပ်ကပ်ခြင်းနှင့်တိုင်းတာမှုများအနေဖြင့်မြင့်မားသောလိင်ဆန္ဒများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေးများ၊ ခံစားချက်များနှင့်လိုအပ်ချက်များကိုစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်သက်ဆိုင်သောစိတ်ဆင်းရဲမှုအမှတ်အသားဖြစ်နိုင်သည်။
တနည်းကား၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမူအကျင့်စွဲစွဲလမ်းမှုသည်လိင်ဆိုင်ရာအတွေးများ၊ ခံစားချက်များနှင့်လိုအပ်ချက်များကိုမြင့်မားစွာဖော်ပြသည်။ “ မြင့်မားသောလိင်ဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ” သည်စွဲလမ်းမှုတည်ရှိခြင်းကိုဖယ်ရှားပေးရန်အကြံပြုလိုခြင်းသာဖြစ်သည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောလေ့လာချက်များအရ“ ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုသည်ဆန္ဒအလွန်မြင့်မားသည်” ကိုတိုက်ရိုက်ငြင်းဆိုသည်။
ဘာစွဲ: အတွေ့အကြုံလိင်စိတ်နိုးထညစ်ညမ်းနှင့်မစစ်မှန်သောဘဝလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်စောင့်ကြည့်သည့်အခါခြားနားချက် (2013) စေသည်
quote: ထို့အပြင်ပြitနာရှိသည့် cybersex အသုံးပြုသူများသည်လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများတင်ပြခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သောတုန်လှုပ်ချောက်ချားဖွယ်တုံ့ပြန်မှုများကိုပြသခဲ့သည်။ လေ့လာမှုနှစ်ခုလုံးတွင်လက်တွေ့ဘဝဖြစ်သည့်လိင်အဆက်အသွယ်များ၏အရေအတွက်နှင့်အရည်အသွေးသည်ဆိုက်ဘာဆက်စွဲခြင်းနှင့်ဆက်စပ်မှုမရှိပါ။
ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှုနှင့်အတူ Functional ဆက်သွယ်မှု Associated: Porn အပေါ်ဦးနှောက် (2014).
ဤသည် fMRI လေ့လာမှု vanilla ညစ်ညမ်းဓါတ်ပုံများကိုထိတွေ့သည့်အခါတစ်ပတ်ကိုပိုမိုမြင့်မားနာရီ / ညစ်ညမ်းပိုနှစ်ပေါင်းလျော့နည်းဦးနှောက်ကို Activation ဆက်နွယ်နေကြောင်းကိုကြည့်ရှုခြင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ သုတေသီ said:
Kühn & Gallinat သည်အကျိုးအမြတ်နည်းသောဆားကစ်မီးခိုးရောင်နှင့်လှုံ့ဆော်မှုထိန်းချုပ်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သောဆားကစ်များပြတ်တောက်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုမှုကိုပိုမိုဖော်ပြခဲ့သည်။ In ဤဆောင်းပါးတွင် သုတေသီဆီမှKühn, said:
Kühnတည်ဆဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ, သိပ္ပံနည်းကျစာပေ porn ၏စားသုံးသူဝတ္ထုနှင့်ပိုပြီးအစွန်းရောက်လိင်ဂိမ်းတွေနဲ့ပစ္စည်းရှာကြလိမ့်မည်အကြံပြုကပြောပါတယ်။
"ဒါဟာမိမိတို့အကျိုးကိုစနစ်များကြီးထွားလာဆွလိုအပျကွောငျးဿုံအဆိုပါယူဆချက် fit လိမ့်မယ်။ "
ရိုးရှင်းစွာထားပါ, ပို porn ကိုအသုံးပြုဖို့သူအအမျိုးသားတွေပေါ့ပါးစားသုံးသူများ၌တွေ့မြင်တုံ့ပြန်မှုအဆင့်ကိုပိုမိုနှိုးဆွလိုအပ်ပါတယ်စေခြင်းငှါ, vanilla ညစ်ညမ်းဓါတ်ပုံများကိုအားလုံးကြောင်းစိတ်ဝင်စားဖို့အဖြစ်မှတ်ပုံတင်ရန်မဖြစ်နိုင်ဖြစ်ကြသည်။ ဒီထက်စိတ်ဝင်စားမှုနည်းအာရုံစိုက်မှုနှင့်အောက်ပိုင်း EEG ဖတ်မှနှိုင်းယှဉ်ထားသည်။ ဇာတ်လမ်း၏အဆုံး။
နှင့် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (2014) မပါဘဲပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Cue reactivity ၏အာရုံကြောဆက်စပ်
ဒီလေ့လာမှုက porn စွဲသူများသည်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲသူများနှင့်အရက်သမားများတွင်တွေ့ရသည့်အတိုင်း ဦး နှောက်လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူတူဖြစ်သည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။ သုတေသီများကလည်း (၆၀%) ဘာသာရပ်များ (ပျမ်းမျှအသက် - ၂၅ နှစ်) သည်အစစ်အမှန်မိတ်ဖက်များနှင့်စိုက်ထူခြင်း / နှိုးဆွမှုရရှိရန်အခက်အခဲရှိသော်လည်း၊ ဤတွေ့ရှိချက်သည်အတင်းအဓမ္မညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုသူများသည်မလိုမုန်းတီးသူများမဟုတ်သောသူများထက်ပိုမိုမြင့်မားသောလိင်ဆန္ဒများရှိသည်ဟူသောပြောဆိုချက်ကိုလုံးဝဖျက်သိမ်းလိုက်သည်
အဘယ်ကြောင့်မေးခွန်းလွှာပြီးတော့ EEG ဖတျရှုပွီးအကြားအဘယ်သူမျှမဆက်စပ်?
တို့ကအဓိကပြောဆိုချက်ကို သံမဏိ et al ယင်းကြောင့် ဆက်စပ်မှုမရှိခြင်း EEG ဖတ်ခြင်း (P300) ဘာသာရပ်များနှင့်အချို့သောမေးခွန်းလွှာများသည်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုမရှိဟုဆိုလိုသည်။ ဆက်စပ်မှုမရှိခြင်းကိုအဓိကအကြောင်းပြချက်နှစ်ခုက -
အဆိုပါမေးခွန်းနှစ်ခု Steele et al ။ EEG လေ့လာမှုနှစ်ခုစလုံးတွင် 'porn စွဲ' မှုအားအကဲဖြတ်ရန်မှီခိုအားထားမှုသည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုအသုံးပြုမှု / စွဲလမ်းမှုအတွက်စစ်ဆေးရန်အတွက်တရားဝင်မဟုတ်ပါ။ စာနယ်ဇင်းများတွင် Prause က EEG ရမှတ်များနှင့်“ hypersexuality” အကြေးအကြားဆက်စပ်မှုမရှိခြင်းကိုအကြိမ်ကြိမ်ထောက်ပြခဲ့သည်။ သို့သော်ညစ်ညမ်းသောစွဲသူများအတွက်ဆက်စပ်မှုတစ်ခုမျှော်လင့်ရန်အကြောင်းပြချက်မရှိပါ။
စမ်းသပ်ခြင်းဘာသာရပ်များ၏လက်မခံနိုင်မတူကွဲပြားခြင်း: အဆိုပါသုတေသီများစှာကွဲပြားခြားနားသောဘာသာရပ်များ (အမျိုးသမီးများ, ယောက်ျား, လိင်ကွဲ, Non-လိင်ကွဲ) ကို ရွေးချယ်. , ဒါပေမယ့်သူတို့အားလုံးကိုစံ, ဖြစ်နိုင်သည်စိတ်မဝင်စား, အထီး + အမျိုးသမီး porn ပြသခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်သုတေသီများကို select သောစွဲလေ့လာမှုများ, များအတွက်စံလုပ်ထုံးလုပ်နည်းချိုးဖောက်နေသောကြောင့်ဤအရေးပါ တစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်း အသက်၊ ကျား၊ မ၊ တိမ်းညွတ်မှုနှင့်ဆင်တူသောအိုင်ကျူ (IQ) အရဘာသာရပ်များ (ပိုပြီး ထိုကဲ့သို့သောကွဲပြားခြားနားမှုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ပျက်ယွင်းရှောင်ရှားနိုင်ရန်အတွက်တစ်ဦးတစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုသည်) ။ တကယ်တော့တစ်ဦး ပြည့်စုံ Meta-analysis သည် စွဲလေ့လာမှုများအတွက် cue-reactivity ကို၏ယောက်ျားနှင့်မိန်းမဦးအကြားသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှုအစီရင်ခံ:
"ကျား, မ, အာရုံကြော cue တုံ့ပြန်မှုအပေါ်သက်ရောက်မှုပုံရသည်။ ထို့ကြောင့် culmen နှင့် caudate ခန္ဓာကိုယ်ရှိမူးယစ်ဆေးဝါးများကိုအပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှုသည်အထီးမူးယစ်ဆေးမှီခိုသောလူနာများအတွက်သီးသန့်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်အင်ဆူလာ၏သဘာဝလှုံ့ဆော်မှုများကိုအပြန်အလှန်တုန့်ပြန်မှုကစတိုးဆိုင်ပေါ်လာသည်။ နောက်ထပ်အထီး - တိကျတဲ့အာရုံခံဆဲလ်တုံ့ပြန်မှုကိုတင်ပြသည်။ သို့သော် anterior cingulated cortex ၏နှစ်ဖက်သက်ဝင်မှုသည်အမျိုးသမီး cue ဓာတ်ပြုခြင်း၏လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဆိုပါ sensitivity ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၏ဤရလဒ်များကိုအာရုံခံ cue တုံ့ပြန်မှုအတွက်ကျား, မ - တိကျတဲ့အစိတ်အပိုင်းများ၏တည်ရှိမှုကိုဖော်ပြသည်။ "
အဆိုပါဦးနှောက်ထဲမှာလိင်: အဆိုပါဖြစ်ရပ်ကို Related အလားအလာများအကြားဆက်ဆံရေးနှင့်ဘာသာရပ်လိင်စိတ်နိုးထ
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှ subliminal ထိတွေ့ယောက်ျားမိန်းမတို့တွင်တူညီသောသက်ရောက်မှုရှိပါသလား (2007)
တစ်ဦးကပဏာမအားသုံးသပ်ခြင်း (2016): ကျားနှင့် Sensation ရှာအံ့သောငှါတစ်ဦးရာထူးအမည်အဖြစ်လိင်လှုံ့ဆော်မှုမှတုံ့ပြန်ချက်တစ်ခု fMRI လေ့လာ
ဆေးလိပ်သောက်သူများအတွက်စိတ်ခံစားမှုများနှင့်ဆေးလိပ်လှုံ့ဆော်မှုများ၏ကွဲပြားအမျိုးအစားများမှတုံ့ပြန်မှုအတွက်နှောင်းပိုင်းအပြုသဘောဆောင်သောနိုင်သည့်အလားအလာ, (LPP): တစ်ဦးကအကြောင်းအရာနှိုင်းယှဉ် (2016)
Erotica (2016) ကို Exposure စဉ်အတွင်းအာရုံစူးစိုက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များအပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောစိတ်ခံစားချက်စတိတ်ပီသသူရဲ့ကွာခြားချက်အပြုသဘောဆောင်သော၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်လိင်ကွဲပြားမှုများ၏အာရုံကြောအခြေခံ: တစ်ဦးကအရေအတွက် Meta-analysis သည် (2016)
အမျိုးသမီးရာသီစက်ဝန်းကာလအတွင်း estradiol ၏အတက်အကျ: နှောင်းပိုင်းအပြုသဘောအလားအလာ (2018) တွင်ခေါ်ဆောင်သွားလှုံ့ဆော်မှုဆီသို့ဦးတည် reactivity ကိုအပေါ်သွဇာ
ရိုမန်းတစ် Vs လိင်အကဲဆတ်သောလှုံ့ဆော်မှု (2018) အားအလိုအလျှောက်အာရုံစူးစိုက်မှုအတွက်ကျားကွာခြားချက်များ
ပုဂ္ဂလဒိဋ္လိင်စိတ်နိုးထနှင့်လိင်အင်္ဂါတုန့်ပြန်အကြားဆက်သွယ်မှုကို: အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးအကြားကွဲပြားခြားနားမှု (2019)
အကဲဆတ်သောပစ္စည်းများ Sexually ဖို့ဇီဝနှင့်စိတ်ဓာတ်တုံ့ပြန်မှုအကြားဆက်နွယ်မှုကို: Meta-ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအသုံးပြုခြင်းတစ်ဦးကစာပေအကျဉ်းချုပ်
လိင်ကွဲများနှင့်ငိုကြွေးနေသောကောင်ကလေးအမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှအာရုံကြောတုံ့ပြန်ချက်: အမျိုးသားများအတွက်ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်ပိုမိုတိကျသော Are (2019)
SCS ကဲ့သို့ဒုတိယ hypersexuality မေးခွန်းလွှာ၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစကေး၏သိမှုနှင့်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာရလဒ်များ (CBOSB, McBride, Reece, & Sanders, 2007) အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုအသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းများမရှိပါ။ ၎င်းသည်“ hypersexual” ဘာသာရပ်များနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများကိုထိန်းချုပ်ရန်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ အင်တာနက်ပေါ်တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဖော်ပြသောပစ္စည်းများအလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်းမဟုတ်ပါ။
အဘယ်သူမျှမထိန်းချုပ်ရေး Group မှ, သို့သျောလညျးအရေးဆိုမှုများလိုအပ်ပါသည်တစ်ခုမှာ
သုတေသီများသည်ပြproblemနာမဟုတ်သောညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုသူများကိုထိန်းချုပ်သည့်အဖွဲ့ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းမပြုပါ။ ဒါကထိန်းချုပ်သူအုပ်စုနှိုင်းယှဉ်မှုလိုအပ်သောမီဒီယာများတွင်ပြောဆိုမှုများပြုလုပ်ရန်စာရေးဆရာများအားမတားဆီးနိုင်ပါ။ ဥပမာ:
Prause- အကယ်၍ သင်သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများသည်စွဲလမ်းသည်ဟုယူဆပါက၊ တိုးမြှင့်တုန့်ပြန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပုံများကိုဖြစ်ကောင်းဖြစ်မည်။ အကယ်၍ ၎င်းသည်ထိုးထွင်းသိမြင်မှု၏ပြit'sနာဟုသင်ထင်လျှင်၎င်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပုံများကိုတုန့်ပြန်မှုကျဆင်းလာလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်လိမ့်မည်။ နှင့် အဲဒီဆက်ဆံရေးကိုကျွန်တော်တို့မမြင်မိဘူးဆိုတဲ့အချက်ပဲ ဒီပြသနာကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုစွဲလမ်းမှုတစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်ဖို့ကြီးကြီးမားမားအထောက်အပံ့မရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။
အဖြစ်မှန်မှာတော့ Steele က et al ။ ကြားနေပုံများထက် porn ရုပ်ပုံများအတွက်ပိုမိုမြင့်မား P300 ဖတ်အစီရင်ခံခဲ့သည်။ ဒါက claerly တစ်ခု "တိုးမြှင့်တုန့်ပြန်“ အောက်မှာမှတ်ချက်ပေး စိတ်ပညာယနေ့တွင်အင်တာဗျူး Prause, p ၏sychology ပါမောက္ခဆရာယောဟနျအေဂျွန်ဆင်ကပြောပါတယ်:
သူမကသူမ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်များအတွက် P300 ဖတ်ခြင်းကိုပိုမိုမြင့်မားစွာဖော်ပြခဲ့ခြင်းကြောင့်သူမအနေဖြင့်မူးယစ်ဆေးစွဲသူများ၏ ဦး နှောက်သည်သူတို့၏မူးယစ်ဆေးဝါးကိုတုန့်ပြန်သည့်အနေဖြင့်သူမဘာသာရပ်များ၏ ဦး နှောက်သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပုံများကိုတုန့်ပြန်ခြင်းမရှိဟု Prause ၌ကျွန်ုပ်ထင်နေဆဲဖြစ်သည်။ P300 spikes များကိုပြသသောဆေးစွဲသူများကဲ့သို့ပင်၎င်းတို့ရွေးချယ်သောဆေးနှင့်ပြသသောအခါ။ အမှန်တကယ်ရလဒ်များ၏ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သောကောက်ချက်ကိုသူမည်သို့ကောက်ယူနိုင်မည်နည်း။ သူမရှာတွေ့လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ထားသည့်သူမ၏ကြိုတင်အမြင်များကိုသူလုပ်နိုင်သည်ဟုထင်ပါသည်။
တိုတိုတှငျအဘယျ Prause ရဲရငျ့စှာသူမ၏အများအပြားမီဒီယာအင်တာဗျူးတွေအတွက်ကွှေးကျွောရလဒ်များအားဖြင့်ဖွင့်ကျောထောက်နောက်ခံပြုမထားပါ။ တစ်ဦးကိုထိန်းချုပ်အုပ်စုတစ်စုလိုအပ်သောအင်တာဗျူးကနေအခြားအရေးဆိုမှု:
Prause: ကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာမှုထိုကဲ့သို့သောပြဿနာများသတင်းပို့သူတွေကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေကသူတို့ရဲ့ဦးနှောက်တုံ့ပြန်မှုကနေအခြားအစွဲများကဲ့သို့ကြည့်ရှုခြင်းရှိမရှိစမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောကင်းအဖြစ်အတွင်းမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၏လေ့လာရေး, အလွဲသုံးစားမှု၏မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ရုပ်ပုံများကိုမှဦးနှောက်တုံ့ပြန်မှုတစ်ခုတသမတ်တည်းပုံစံကိုပြသကြပါပြီ, ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာတကယ်တော့တစ်ဦးကခဲ့လျှင်လိင်နှင့်အတူပြဿနာများသတင်းပို့သူတွေကို၌တူညီသောပုံစံကိုတွေ့မြင်သင့်ကြောင်းခန့်မှန်း စွဲလမ်း။
Mustanski အား Prause ၏ပြန်ကြားချက်ကသူမလေ့လာမှုသည်လိင်နှင့်ပတ်သက်သောပြproblemsနာများကိုသတင်းပို့သူများအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်များကို ဦး နှောက်တုန့်ပြန်မှုသည်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူများ၏ ဦး နှောက်တုန့်ပြန်မှုနှင့်ဆင်တူသလားဆိုသည်ကိုကြည့်ရှုရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။
သူမကိုးကားသည့်ကိုကင်းလေ့လာမှုတစ်ဦးကစာဖတ်ခြင်း (Dunning, et al ။ , 2011)သို့သော်သံမဏိ et al ၏ဒီဇိုင်းကိုညွှန်ပြနေပါသည်။ အဆိုပါ Dunning လေ့လာမှုကနေအတော်လေးကွဲပြားခြားနားကြီးနှင့်သံမဏိ et al သော။ ပင် Dunning လေ့လာမှုတှငျမှတျတမျးတငျထားသဦးနှောက်တုံ့ပြန်မှုမျိုးမရှာခဲ့ပါဘူး။
အဆိုပါ Dunning လေ့လာမှုသုံးခုအုပ်စုများကိုအသုံးပြု: 27 ကိုကင်းသုံးစွဲသူများ 28 လက်ရှိကင်းသုံးစွဲသူများနှင့် 29 Non-သုံးပြီးထိန်းချုပ်ဘာသာရပ်များ abstinent ။ သံမဏိ et al ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေ၎င်းတို့၏ကြည့်ထိန်းညှိပြဿနာများကိုသတင်းပို့သောသူတို့အား: ပုဂ္ဂိုလ်များ၏တစ်ဦးတည်းသာနမူနာကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ အဆိုပါ Dunning လေ့လာမှုကျန်းမာမှကိုကင်းစွဲများ၏တုံ့ပြန်မှုနှိုင်းယှဉ်နိုင်ခဲ့သွားရမည်အကြောင်း
ထိန်းချုပ်မှုသည် Prause လေ့လာမှုတစ်ခုထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုတစ်စုနှင့်အတူပူပနမူနာများ၏တုံ့ပြန်မှုနှိုင်းယှဉ်မရခဲ့ပေ။
ပိုပြီးကွဲပြားခြားနားမှုရှိပါတယ်။ ယခင်သုတေသန ERPs တွင်ထင်ဟပ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်အရေးကြီးသောကွဲပြားခြားနားမှုညွှန်ပြခဲ့သောကြောင့် Dunning လေ့လာမှု, ဦးနှောက်ထဲမှာအများအပြားကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်ရပ်-related အလားအလာ (ERPs) တိုင်းတာ။ အဆိုပါ Dunning လေ့လာမှုသီးခြားစီ motivationally သိသိသာသာပစ္စည်းနောက်ထပ်အပြောင်းအလဲနဲ့ရောင်ပြန်ဟပ်ဖို့ထင်စောစောရွေးချယ်အာရုံကိုထင်ဟပ်ဖို့ထင်အစောပိုင်း posterior အဆိုးမြင်စိတ်တွေ (EPN), နှင့်နှောင်းပိုင်းကအပြုသဘောအလားအလာ (LPP) တိုင်းတာ။ အဆိုပါ Dunning လေ့လာမှုနောက်ထပ်အစောပိုင်းခွဲခြား
စဉ်ဆက်မပြတ်အပြောင်းအလဲနဲ့ရောင်ပြန်ဟပ်ဖို့ထင် LPP ၏နောက်ပိုင်းတွင်အစိတ်အပိုင်းကနေ, ကနဦးအာရုံကိုဖမ်းကိုယ်စားပြုထင် LPP ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု။ အဆိုပါ abstinent စွဲအကြားကွဲပြားခြားနားမှုလက်ရှိသုံးစွဲသူများနှင့် Non-သုံးပြီးထိန်းချုပ်မှု ERP အကဲဖြတ်ခံရခဲ့သည့်အပေါ်မှီခိုကြောင့်ဤကွဲပြားခြားနားသော ERPs ကွဲပြားခြားနားသွားအရေးကြီးပါသည်။
ဆနျ့ကငျြ, သံမဏိ et al ။ သာ Dunning LPP ၏အစောပိုင်းဝင်းဒိုးကိုမှနှိုင်းယှဉ်ထားတဲ့ P300 လို့ခေါ်တဲ့ ERP မှာကြည့်ရှုကြ၏။ သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဝန်ခံချက်အသုံးပြုပုံ Prause နှင့်သူမ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များကဒီကအကောင်းဆုံးနည်းဗျူဟာပါပြီမပြုစေခြင်းငှါသတင်းပို့:
နောက်ထပ်ဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုမှာ P300 သည်လိင်ဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုနှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုကိုဖော်ထုတ်ရန်အကောင်းဆုံးနေရာမဟုတ်ပါ။ အနည်းငယ်အကြာတွင် LPP သည်စေ့ဆော်မှုနှင့်ပိုမိုဆက်စပ်မှုရှိသည်။"
အဆိုပါ upshot သောသံမဏိပစ္စည်း et al ဖြစ်ပါသည် မ တကယ်တော့ဆန်းစစ် wလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြtroublနာတက်သူများ၏ ဦး နှောက်တုံ့ပြန်မှုသည်“ တူညီသည်"စွဲ၏တုံ့ပြန်မှုအဖြစ်။ သူတို့ကကိုကင်းလေ့လာမှုတွင်အသုံးပြုသော ERP variable များကိုအတူတကွမသုံးခဲ့ကြ၊ သူတို့တွင် abstinent group နှင့် control group ကိုမသုံးခဲ့ကြချေ။ ထို့ကြောင့်သူတို့၏ရလဒ်များကိုနှိုင်းယှဉ်မှုမှာ“ ပန်းသီးနှင့်ပန်းသီးတို့ဖြစ်သည်။ ”
နောက်ဆုံးအနေနှင့် EEG နည်းပညာသည်သုတေသီများမှပြောကြားသည့်ရလဒ်များကိုတိုင်းတာ။ မရပါ။ သုတေသီများ "ဟုအခိုင်အမာhypersexuals တစ်နမူနာများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှအာရုံကြောတုံ့ပြန်မှု [မြင့်မားသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒသာရှိပြီးပြည်ပမှစွဲအထောက်အထား] လက္ခဏာတွေဤနှစ်ခုယှဉ်ပြိုင်ရှင်းလင်းချက်ခွဲခြားနိုင်ကြောင်း,တကယ်တော့ EEGs ကဒီလိုလုပ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ EEG နည်းပညာသည်နှစ်ပေါင်း ၁၀၀ နီးပါးရှိခဲ့သော်လည်း ဦး နှောက်လှိုင်းများကိုအမှန်တကယ်ဖြစ်ပေါ်စေသောအကြောင်းရင်းများ၊ သို့မဟုတ်မည်သည့်တိကျသော EEG ဖတ်ရှုချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုများဆက်လက်ရှိနေသည်။ အကျိုးဆက်အနေဖြင့်စမ်းသပ်ရလဒ်များကိုနည်းလမ်းများစွာဖြင့်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူနိုင်ပါသည်။ ကြည့်ပါ Brainwashed: ခွငျးအာရုံကြောသိပ္ပံ၏ seductive အယူခံ EEGs အခြေအမြစ်မရှိကောက်ချက်ဆွဲရန်အလွဲသုံးစားနိုင်ပါသည်မည်သို့ဆွေးနွေးမှုသည်။
EEGs ဦးခေါင်းခွံ၏အပြင်ဘက်တွင်အပေါ်လျှပ်စစ်လှုပ်ရှားမှုတိုင်းတာနှင့် EEGs ကိုအသုံးပြုဖို့သူအစွဲသုတေသီများစွဲ၏တိကျသောရှုထောင့်အလွန်ကျဉ်းမြောင်းသောအချက်ပြမှုများကိုရှာပါ။ ဥပမာ, ဒီ အင်တာနက်ကိုစွဲအပေါ်မကြာသေးခင် EEG လေ့လာမှု အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုအားဖြင့်အာရုံကြောသိပ္ပံပညာရှင်များသည်မည်သို့သောစမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းပြသသည်။ သုတေသီများသည် ဦး နှောက်၏လှုပ်ရှားမှုကဲ့သို့သော impulsivity ကိုကျဉ်းမြောင်းစေပြီး SPAN Lab မှပြုလုပ်သောဤအမျိုးအစားနှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်အမင်းကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ပြောဆိုခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ကြောင်းသတိပြုပါ။ ဒီ SPAN Lab ရဲ့အားထုတ်မှုမှာမရှိတဲ့ control group နဲ့စွဲလမ်းမှုအတွက် pre-screening ကိုလည်းသတိပြုပါ။
P300 [EEG တိုင်းတာခြင်း] ကိုလူသိများပြီးမကြာခဏစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ တစ်ခါတစ်ရံလိင်နှင့်အမြင်အာရုံလှုံ့ဆော်မှုများကိုအာရုံကြောဓာတ်ပြုခြင်းကိုတိုင်းတာရန်အသုံးပြုသည်။ ကြီးမားသောနှေးကွေးသော ERP အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကိုရည်ညွှန်းရာတွင်အားနည်းချက်တစ်ခုသည်ထိုကဲ့သို့သောအစိတ်အပိုင်းများကိုအခြေခံသောသိမြင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များထပ်နေခြင်း၏ပင်မသဘာဝဖြစ်သည်။ လက်ရှိအစီရင်ခံစာတွင် P300 သည်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောသိမြင်မှုဖြစ်စဉ်များကိုရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။
သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဝန်ခံချက်အသုံးပြုပုံ P300 ဒီ type တစ်ခု ERP လေ့လာမှုများအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုမဖြစ်စေခြင်းငှါ, သောစိတ်ဘယ်တော့မှမ။ ယခုခြားနားချက်ရမှတ်မှအခြားရွေးချယ်စရာအများအားဖြင့်အသုံးပြုကြသည်ထိုကဲ့သို့သော, ခြားနားချက်ရမှတ်များနှင့်အတူစာရင်းအင်းဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းပို့ချ 50 နှစ်အတွင်းများအတွက်ပြဿနာအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုထားပြီးကြောင်းစိတ်ထဲဘယ်တော့မှမ (ကြည့်ရှု http://public.kenan-flagler.unc.edu/faculty/edwardsj/Edwards2001b.pdf) ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် P300 ၏လွှဲခွင်ကြားနေရုပ်ပုံများနှင့်သက်ဆိုင်သောအထူးသဖြင့်ပုံရိပ်များနှင့်အမှန်တကယ်ဘာကိုဆိုလိုသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တကယ်မသိကြောင်းစိတ်ထဲမထားပါနှင့်။ P300 တွင်စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာသိသာထင်ရှားသည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုအာရုံစိုက်ခြင်းပါ ၀ င်သည်။ သို့သော် Prause နှင့်သူမ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များမှဝန်ခံသည်နှင့်အမျှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒပြင်းထန်သောသူများအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပုံများကိုတုန့်ပြန်သောအားဖြင့် P300 သည်မြင့်မားသည်၊ P300 ဟာအထူးသဖြင့်ပြားပါတယ်။
မဟုတ်သလိုသူတို့လိင်စိတ်နိုးထကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ (ပိုမိုမြင့်မား P300), သို့မဟုတ် သာ. ကွီးမွတျအာရုံစူးစိုက်မှုအားကြီးသောကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ သာ. ကွီးမွတျအာရုံစူးစိုက်မှုအကြား delineate နိုင် အနုတ်လက္ခဏာစိတ်ခံစားမှုထိုကဲ့သို့သောရွံရှာဘွယ်အဖြစ်။ EEG နည်းပညာသည်လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုနှင့်ထိတ်လန့်ခြင်း / အံ့အားသင့်ခြင်းတို့ကြောင့်ပေါ်ပေါက်လာသောပိုမိုမြင့်မားသော P300 စာဖတ်ခြင်းကို ခွဲခြား၍ မရပါ။ ဦး နှောက်၏ဆုချီးမြှင့်မှုအစီအစဉ်ကိုအသက်သွင်းထားခြင်းရှိမရှိ EEG နည်းပညာကမပြောနိုင်ပါ။
ဒီမှာပိုပြီးအခြေခံကျတဲ့ပြproblemနာရှိတယ် Steele et al ။ လိင်မှုဆိုင်ရာပုံရိပ်များကိုကြည့်ရှုရန်သို့မဟုတ်ချဉ်းကပ်ရန်လိုပုံရသည် - EEG တုံ့ပြန်မှုများသည်လိင်ဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒသို့မဟုတ်စွဲလမ်းစေသောပြproblemနာကြောင့် - ဆန္ဒသည်စွဲလမ်းစေသောပြproblemsနာများနှင့်လုံးဝကွဲကွာသွားနိုင်သည်ကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ မည်သူမဆိုအရက်သမားများသို့မဟုတ်ကိုကင်းဆေးစွဲသူများအတွက် EEG တုံ့ပြန်မှုသည်စွဲလမ်းနေသောအရာဝတ္ထုကိုသူတို့လိုချင်သောဆန္ဒကြောင့်ဖြစ်စေဖြစ်နိုင်ကြောင်းအကြံပြုပါလိမ့်မည်။ or သူတို့ရဲ့စွဲလမ်းပြဿနာ?
အခြားအချက်များ EEG ဖတ်သြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်သည်။ ပုံတစ်ပုံကသင်ကြိုက်နှစ်သက်သောအမျိုးအစားနှင့်ဆက်နွယ်နေလျှင်ဘာလုပ်ရမလဲ။ သို့သော် pornstar ကသင်မနှစ်သက်သောသူ၊ ကြောက်ရွံ့ခြင်း၊ သင်၏ ဦး နှောက်သည်ထိုကဲ့သို့သော erotica အတွက်ကွဲလွဲသောအသင်းအဖွဲ့များရှိလိမ့်မည်။ ဤပconflictsိပက္ခများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအတွက်အမှုန့်များနှင့်နှာခေါင်း (ကိုကင်းဆေးစွဲသူများကိုစမ်းသပ်သည့်အခါအသုံးပြုသော) ကိုကင်း၏ပုံရိပ်များထက် ပို၍ ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိသည်။
အဆိုပါအချက်လိင်အဖြစ်ရှုပ်ထွေးအဖြစ်စီးပွားရေးနှိုးဆွမှုနှင့်အတူမျိုးစုံအသင်းအဖွဲ့များကိုအလွယ်တကူ EEG ဖတ် skew နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဒါ့အပြင် သံမဏိ et al။ ပိုမိုမြင့်မားသော EEG ပျမ်းမျှနှုန်းသည်လိင်မှုနှိုးဆွမှုကိုပိုမိုမြင့်မားသည်ဟုယူဆသော်လည်းဘာသာရပ်များ၏ EEG ပျမ်းမျှအားဖြင့်မြေပုံတစ်ပုံလုံးတွင်ရှိသည်။ သူတို့ထဲကတချို့ဟာစွဲလမ်းသူတွေဖြစ်ပြီးတချို့ကမဟုတ်ဘူး။ ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကိုပိတ်ထားသည့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်း။ အချက်အလက်များစွာသည် P300 ဖတ်ခြင်းကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။ အောက်ပါတို့ကိုသုံးသပ်ကြည့်ပါ အခြား P300 လေ့လာမှု:
P300 ၏အလုပ်လုပ်တဲ့အရေးပါမှုနေဆဲအခြေအတင်ဆွေးနွေးပေမဲ့1, 2၎င်း၏လွှဲခွင်လှုံ့ဆော်မှုများ၏အကဲဖြတ်ဘို့အရင်းအမြစ်များကိုခွဲဝေချညွှန်း ... ။လျှော့ချ P300 လွှဲခွင် schizophrenia အပါအဝင်အများအပြားစိတ်ရောဂါမမှန်, အစီရင်ခံထားသည်4, စိတ်ကျရောဂါ5နှင့်အရက်6.
အတိုချုပ်ဆိုရလျှင်၊ စွဲသူများ၏ ဦး နှောက်သည်စွဲလမ်းမှု၏သက်သေအထောက်အထားများသို့မဟုတ်“ မြင့်မားသောလိင်ဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ” ၏သက်သေအထောက်အထားများကိုပြလိမ့်မည်ဟုစာရေးသူ၏ယူဆချက်သည်မလိုက်နိုင်ပါ။ သို့သော်စိတ္တဇသည်စာဖတ်သူကိုလေ့လာမှု၏ရလဒ်များကဤ hypersexuals များသည်စွဲလမ်းကြောင်းအထောက်အထား (၁) သို့မဟုတ် (၂) နှင့်အတူအပြုသဘောဆက်နွယ်မှုရှိကြောင်းပြသလိမ့်မည်ဟုထင်မြင်စေသည်။ ထို့နောက်လေ့လာမှုခေါင်းစဉ်သည်အနိုင်ရသူအား“ လိင်ဆန္ဒ” ကိုလှည့်စားကြေငြာခဲ့သည်။
လေ့လာမှု၏ဒီဇိုင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အခြားပြproblemနာတစ်ခုမှာ SPAN Lab သည်စွဲလမ်းမှုနှင့်ဆက်စပ်သောအချက်များကိုစွဲလမ်းမှု (အပြုအမူ) နှင့်ရှုပ်ထွေးစေသည်။ ဒီလေ့လာမှုမှာသုတေသီများကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်းဟာအရက်သောက်ခြင်းနဲ့မတူဘဲဗော့ဒ်ကာပုလင်းတစ်လုံး၏ရုပ်ပုံကိုကြည့်ခြင်းနှင့်မတူဘဲတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းဟာစွဲလမ်းစေသောလုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ ဒါမမှန်ကန်ပါ
သုတေသီများကလုပ်ဖို့ကဤဘာသာရပ်များဟုမေးသောအရာကိုဖြစ်သည့်ညစ်ညမ်း, နေပါတယ်အကဲခတ် အ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းသူအတွက်စွဲလမ်းစေသောလုပ်ဆောင်မှု။ အသုံးပြုသူများစွာသည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်ရွေးချယ်စရာမဟုတ်သည့်တိုင် (ဥပမာဘတ်စကားစီးနေစဉ်၊ စာကြည့်တိုက်ကွန်ပျူတာများ၊ အလုပ်များ၊ စောင့်ဆိုင်းခန်းများစသဖြင့်) ကိုကြည့်ရှုကြသည်။ ဆွများအတွက် porn ကြည့်ရှု is သူတို့ရဲ့ထိန်းအကွပ်မဲ့အပြုအမူ။
ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်၊ ညစ်ညမ်းစွဲစွဲသူများအတွက်မှန်ကန်သောအရာများသည်သူတို့၏အကြိုက်ဆုံးညစ်ညမ်းဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုအမှတ်အသားပြုခြင်း၊ စကားလုံးတစ်လုံးကိုကြားခြင်းသို့မဟုတ်ရုပ်ပုံများကိုသူတို့အကြိုက်ဆုံး porn fetish သို့မဟုတ် porn ကြယ်ပွင့်၊ အမြန်အင်တာနက်အမြန်နှုန်းကိုသတိပေးခြင်းစသည့်အရာများဖြစ်သည်။ သေချာသည်မှာ fetish ကိုအချက်ပြသည့်ပုံရိပ်ကိုကြည့်ခြင်းသည်ထို fetish porn အမျိုးအစားကိုစွဲလမ်းနေသူတစ် ဦး အတွက်အဖြေတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော်ဤနေရာတွင်သုတေသီများသည် generic porn ကို အသုံးပြု၍ အကြောင်းအရာများ၏တစ် ဦး ချင်းအရသာနှင့်မကိုက်ညီပေ။
ဤလေ့လာမှုသည်မူးယစ်ဆေးဝါးလေ့လာမှုများနှင့်တူသည်ဟူသောယူဆချက်သည် Steele et al ၏မတည်ငြိမ်သောယူဆချက်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ Blackjack စားပွဲ၏ရုပ်ပုံသည်လောင်းကစားမဟုတ်ကြောင်းသတိရပါ။ ရေခဲမုန့်တစ်လုံးရဲ့ပုံကမစားဘူး။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့် porn ကိုကြည့်ရှုခြင်း၊ is အဆိုပါစွဲလမ်းလှုပ်ရှားမှု။ အဘယ်သူမျှစိတ်ကူးအဘယ်အရာကို EEG ဖတ်ရှိပါတယ် သင့် သူတို့ရဲ့စွဲလမ်းလှုပ်ရှားမှုထဲမှာပါဝငျ porn စွဲအဘို့ဖြစ်လိမ့်မည်။
အခြားစွဲလမ်းမှုများနှင့်စပ်လျဉ်း။ စစ်မှန်သော cue သုသေသနပြုချက်အရသူတို့၏ရလဒ်များကိုဆွေးနွေးခြင်းအားဖြင့်သုတေသီများက၎င်းတို့သည်“ ပန်းသီးနှင့်ပန်းသီးနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်း” ဖြစ်သည်ဟုဆိုကြသည်။ သူတို့မဟုတ်။ ပထမတစ်ခုက Steele et al ။ အခြားစွဲလမ်းမှုများကိုလေ့လာသည်။ ကိုးကားဓာတုစွဲပါဝင်သည်။ ရှင်းပြပြီးသားအကြောင်းပြချက်များအတွက်ညစ်ညမ်းမှုကိုဓာတ်ခွဲခန်းတွင်စမ်းသပ်ရန်မလွယ်ကူပါ။ ဒုတိယ၊ Steele et al ၏ဒီဇိုင်း။ ၎င်းသည်ကိုးကားထားသောလေ့လာမှုများနှင့်လုံးဝကွဲပြားသည် (ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုများစသည်) ။
လိင်ဆိုင်ရာပုံများသို့မဟုတ်ရှင်းလင်းပြတ်သားသောရုပ်ရှင်များအတွက် cue-reactivity နှင့် ပတ်သက်၍ အနာဂတ်လေ့လာမှုများသည်ရလဒ်များကိုသူတို့၏အနက်ဖွင့်ဆိုရာတွင်အလွန်သတိထားရမည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ဦး နှောက်တုံ့ပြန်မှု "စွဲမဟုတ်" ထက်, desensitization သို့မဟုတ်လေ့ညွှန်ပြနိုင်ဘူး။
ပထမဦးစွာတဦးတည်းကဒီလေ့လာမှုထုတ်ဝေခဲ့ဖူးဘူးသင့်ကြောင်းခိုင်ခံ့အငြင်းအခုံစေနိုင်သည်။ ဘာသာရပ်များ၎င်း၏မတူကွဲပြားမှု, အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစွဲ, Co-ရောဂါများအတွက်စိစစ်မှုမရှိခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုတစ်စု၏မရှိခြင်းအကဲဖြတ်၏နိုငျ questionnaires စိတ်မချရရလဒ်များကိုခဲ့သည်။
ဒုတိယအချက်မှာတစ် ဦး တည်းအပြန်အလှန်ဆက်စပ်မှု - ပိုမိုမြင့်မားသော P300 နှင့်အတူ correlating ပူးပေါင်းလိင်များအတွက်လျော့နည်းအလိုဆန္ဒ - ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအသုံးပြုခြင်းသည် cue-reactivity ကိုပိုမိုဖြစ်ပေါ်စေကြောင်းပြသသည်။ ရိုးရိုးလေးပြောရမယ်ဆိုရင်ညစ်ညမ်းတဲ့ညစ်ညမ်းတဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအသုံးပြုသောဘာသာရပ်များ၊ သို့သော်ကြည့်ရှုသူများထက်လိင်မှုကိစ္စအလိုဆန္ဒသည်နည်းသည် မီဒီယာများတွင်ခေါင်းကြီးပိုင်းတွင်ဖော်ပြထားသည့်သို့မဟုတ်ရေးသားသူများကမီဒီယာတွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းအတိအကျမဟုတ်ပါ (ညစ်ညမ်းမှုကိုပိုမိုအသုံးပြုခြင်းသည်ပိုမိုမြင့်မားသောဆန္ဒ“ လိင်ဆန္ဒ” နှင့်ဆက်စပ်နေသည်) ။
တတိယအချက်၏“ ဇီဝကမ္မ” တွေ့ရှိချက် porn နှင့်ထိတွေ့သည့်အခါပိုမိုမြင့်မား P300 တစ်ခုစွဲဖြစ်စဉ်ကိုဖြစ်သည့်ာင်း (porn မှ Hyper-reactivity ကို), ဖော်ပြသည်။
နောက်ဆုံး၌ကျွန်ုပ်တို့သည်စာရေးသူများအနေဖြင့်သတင်းအချက်အလက်များကိုအနည်းငယ်သာကွာဝေးသောမီဒီယာသို့တောင်းဆိုမှုများပြုလုပ်သည်။ သတင်းခေါင်းစဉ်များအရသတင်းစာဆရာများသည်လှည့်ဖျားမှုကို ၀ ယ်သည်မှာရှင်းနေပါသည်။ ဤသည်သိပ္ပံသတင်းစာပညာ၏ဖှယျပြည်နယ်ညွှန်ပြ။ သိပ္ပံဘလော့ဂါများနှင့်သတင်းဌာနများကသူတို့ကျွေးမွေးသည့်အရာကိုရိုးရိုးလေးပြန်ပြောကြသည်။ မီဒီယာမှမည်သူမျှလေ့လာမှုကိုဖတ်ရှုခြင်း၊ အချက်အလက်များကိုစစ်ဆေးခြင်းသို့မဟုတ်အမှန်တကယ်စွဲအာရုံကြောသိပ္ပံပညာရှင်များထံမှပညာတတ်သောဒုတိယထင်မြင်ချက်ကိုတောင်းခံခြင်းမရှိပါ။ အကယ်၍ အစီအစဉ်တခုကိုသင်မြှင့်တင်လိုလျှင်၊ သင်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်မှာပါးနပ်သောသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်၏လေ့လာမှုသည်အမှန်တကယ်တွေ့ရှိသည့်အရာသို့မဟုတ်သင်၏ချို့ယွင်းချက်နည်းစနစ်သည်အချက်အလက်အသုပ်ကိုသာထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်းသည်အရေးမကြီးပါ။
သတင်းအချက်အလက်မှားယွင်းနေသည့်သတင်းမီဒီယာသည် Robert Weiss၊ LCSW နှင့် Stefanie Carnes PhD တို့၏ Bogus လိင်စွဲလမ်းမှုလေ့လာမှုကိုစမ်းသပ်သည်။
Linda Hatch မှ PhD မှ“ လိင်စိတ်စူးစမ်းမှုဟုမခေါ်ပါနှင့်။ လိင်စွဲချက်ကိုဘာလို့လိုတာလဲ
Steele et al ကဲ့သို့ပင် ၂၀၁၃ ခုနှစ်ဒုတိယ SPAN Lab မှလေ့လာမှုသည်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်“ စွဲလမ်းသူများ” အကြားသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှုများကိုတွေ့ရှိခဲ့သည် -တစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ရှင်ပွဲတော် (2013) မှသူတို့ရဲ့စိတျလှုပျရှားမှုအစီရင်ခံ "Hypersexuals" တွင် Emotion Dysregulation ၏အထောက်အထားမျှမ။ " ရှင်းပြထားသည် ဒီဝေဖန်မှု, ခေါင်းစဉ်အမှန်တကယ်တွေ့ရှိချက်ဖုံးကွယ်။ တကယ်တော့ "စွဲလမ်း" ရှိခဲ့ပါတယ် နည်းသော ထိန်းချုပ်မှုနဲ့နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာစိတ်ခံစားမှုတုံ့ပြန်မှု။ ဤသည်အများအပြားအဖြစ်အံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး porn စွဲထုံခံစားချက်တွေကိုသတင်းပို့ နှင့်စိတ်ခံစားမှု။ စာရေးသူများသည်ခေါင်းစဉ်ကို“ ပိုမိုစိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှု” မျှော်လင့်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ သို့သော်ဤသံသယရှိသော“ မျှော်လင့်ချက်” အတွက်အကြောင်းပြချက်မရှိပါ။ ပို၍ တိကျသောခေါင်းစဉ်မှာ -အခက်အခဲဟာသူတို့ရဲ့ porn အသုံးပြုမှုကိုထိန်းချုပ်သူဘာသာရပ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ရှင်မှလျော့နည်းစိတ်ခံစားမှုတုံ့ပြန်မှုကိုပြသ“ သူတို့ဟာ desensitized ခဲ့ကြသည်
ကိုကင်းတဏှာကင်း-related လှုံ့ဆော်မှုမှ electrophysiological ဦးနှောက်တုံ့ပြန်မှု (2008) နဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှ subliminal ထိတွေ့ယောက်ျားမိန်းမတို့တွင်တူညီသောသက်ရောက်မှုရှိပါသလား (2013)
လိင်ကွဲအမျိုးသမီးနှင့်အမျိုးသားများတွင်လိင်အင်္ဂါများနှင့်ပုဂ္ဂလဒိဋ္လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှု (2012) ရက်နေ့တွင်အသံဇာတ်လမ်းများထဲမှာကျားမနှင့်ဆက်ဆံရေးမျိုးအခြေအနေတွင်၏ဆိုးကျိုးများ
ပစ္စည်းဥစ္စာ-related တွေကိုတဖက်သတ်သိမြင်အပြောင်းအလဲနဲ့၏ Electrophysiological ညွှန်းကိန်း: တစ် Meta-analysis သည် (2012)
အဖြစ်အပျက်-related အလားအလာ abstinent ကိုကင်းစွဲ (2004) တွင်ကိုကင်းတွေကိုစိတ်ခွန်အားနိုးဆက်စပ်မှုညွှန်ပြ
လိင်သုတေသနအတွက်ရွေးချယ်ခြင်းရုပ်ရှင်: ခေါ်ဆောင်သွားရုပ်ရှင် preference ကို (2003) တွင်ကျား, မကွဲပြားမှု
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုဖို့ဦးနှောက်ကို Activation အတွက်လိင်ကွဲပြားမှု: neuroimaging လေ့လာမှုများတစ် Meta-analysis သည် (2012)
အာရုံဖြစ်ရပ်-related အလားအလာများနှင့်ပုဂ္ဂလဒိဋ္လိင်စိတ်နိုးထ (2016) တို့အကြားမာတိကာနှုန်းထားများအတွက်လိင်ကွဲပြားမှု
တစ်ဦး fMRI လေ့လာမှု (2015): ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာအမြင်အာရုံခေါ်ဆောင်သွားလှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့်နျူကလိယ accumbens နှင့်အမြင်အာရုံ cortex အကြားအပြန်အလှန်အတွက်လိင်ကွဲပြားမှု
Visual လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှတုံ့ပြန်မှုအတွက်လိင်ကွာခြားချက်များ: တစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း (2008)
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုကြည့်ရှုအတွက်လိင်ကွဲပြားမှု: အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတစ်ဦးမျက်စိ-ခြေရာခံလေ့လာမှု (2007)
ခေါ်ဆောင်သွားခြင်းနှင့် Non-ခေါ်ဆောင်သွားလှုံ့ဆော်မှု (2008) မှအမြင်အာရုံအာရုံစိုက်မှုအတွက်လိင်ကွဲပြားမှု)
လိင်ကွဲပြားမှု (2014): စိတ်ခံစားမှု-Charge ပုံရိပ်တွေထိတွေ့ကာလအတွင်းလူသားများတွင်အရေပြားစာနာအာရုံကြောလှုပ်ရှားမှု
ကိုကင်းတဏှာ၏အသစ်နှစ်ခု neurophysiological ညွှန်းကိန်း: evoked ဦးနှောက်အလားအလာများနှင့် cue modulated ထိတ်လန့်တုံ့ပြန်မှု (2004) ။